မှေးစားသမီးသနျးသနျး – My Blog
လကျခုံပျေါရောကျနသေော လရညျဖွူဖွူပွဈပွဈမြားကို လြှာဖွငျ့သိမျးကာ မွိုခလြိုကျသညျ။ပွီးမှ အားမရသလို လီးကိုပါးစပျထဲ ရသလောကျ သှငျးပွီးနှုတျခမျးကိုတငျးတငျးလုပျခါ ခပျသှကျသှကျဆောငျ့ဆောငျ့ခသြညျ။ ဒဈပျေါရုံ ထုတျခါ ဒဈကွီးတဈခုလုံးကို လြှာဖွငျ့သိမျးသိမျး လကျြသညျ။ပွနျလညျမာနျကနြသေော လီးတခြောငျးကို လကျဖြားနုနုလေးဖွငျ့ အဖိုးတနျပစ်စညျးတဈခုလို တယုတယ ကိုငျနသေေး၏။လီးထိပျမှ လရညျတဈစကျ ဖွတျခနဲထှကျလာသေးသဖွငျ့ လြှာကိုထုတျပွီးလကျြလိုကျသေးသညျ။ “မ သနျး..တျောပွီလေ.၊ လရညျမွိုတာ မဝသေးဘူးလား၊ကြှနျတျောတော့ ဒေါငျးနပွေီ၊” စိုငျးအိုငျ အမေးကို သနျးသနျးကတဈခဈခဈ ရယျကာ သဘောကရြငျး လီးတံတလြှောကျကိုလကျဖွငျ့ကိုငျနရောမှ နှာခေါငျးဖွငျ့ နမျးရှုံ့လိုကျသညျ။
“ခဈ..ခဈ.အို..မဝပါဘူး..ပထမတဈခါပဲ အားရလိုကျတယျ၊နောကျပိုငျးက နညျးနညျးလာတာကိုး၊” “မသနျးကလဲ လိုးလညျးမလိုးရပဲ နဲ့ ကြှနျတေျာ့ကို သုံးခါတောငျမှုတျတာတော့လှနျတာပေါ့..မသနျးက မှုတျရတာအရမျးကွိုကျတာပဲနျော..ကြှမျးလညျးကြှမျးတယျ” လီးကို နှာခေါငျးဖွငျ့နမျးရှုံ့နသေော သနျးသနျးက အောကျမှနပွေီးစိုငျးအိုငျကို မကျြလုံးလှနျကွညျ့ကာ ညှတုတုပွုံးလိုကျသညျ။ကွမျး ပျေါထိုငျမိနျးမထိုငျထိုငျနသေဖွငျ့ ပိုးပြော့ထမီမှာသူ့တငျပါးကိုကွှားလှငျ့ခါ ပုံကနြသေညျ။ရငျဖုံးအကြီလကျရှညျပနျးရောငျကို ဝတျဆငျထားပွီး ခေါငျးပျေါကဆံပငျကိုထုံးထားကာ ရဲရဲတောကျနသေော နီလဲ့နသေော ပတ်တမွားဆံထိုးကို ထိုးထားသညျ။မကျြနှာက လဲ ကာလာရောငျစုံဖွငျ့ သူမပုံစံက ပှဲတကျလာသညျမှနျးသိသာလှသညျ။စိုငျးအိုငျလီးကို သနျးသနျးစုပျနသေညျမှာ တိုကျခနျးတဈခု အတှငျး ဧညျ့ခနျးရှိဆကျတီ ခုံပျေါဖွဈသညျ။ပတ်တမွားလကျကောကျကို ဝတျဆငျထားသော လကျကလီးကို ကိုငျ၊ပတ်တမွား လကျစှပျ ဝတျထားသော တဈဖကျလကျက ဂှေးဥကိုအသာညှဈပွီး မိတျကပျဆိုငျကပွငျပေးလိုကျ သော စိုလဲ့သောပနျးရောငျနှုတျခမျးနီမြား ဆိုးထားသောနှုတျခမျးက အနီရောငျဒဈဖြားကို ပှပျသကျနသေညျ။
“ဟှငျး..ဒီပုံစံနဲ့ဘယျလို ခံမလဲ၊အခုတောငျ စိုငျးကိုပွုစုခငျြလှနျးလို့ ..အကြီကွသှေားရငျ ..အိမျက ယောကျြားက မေးမှာပေါ့စိုငျးက လဲ..” “ဆကျတီကိုလကျထောကျ ထမီကိုအသာခြှတျပွီး ကုနျးရငျရပါတယျဗြာ..၊သူ .မကုနျးခငျြတိုငျး..မသနျးက နငျးပွီးစုပျတာပဲ” “ခဈ.စိုငျးကလဲကလေးကွနတောပဲ..အတငျးပူစာနတေယျ၊နောကျလဲ လုပျရမှာပဲကို..ကြှနျမကတော့ လီးစုပျတာအကွိုကျဆုံးပဲ… အလိုးမခံရခငျတဲက လီးစုပျလာတာ..အခုတောငျသုံးခါတညျးစုပျရတာ ဒီကနညျးသေးတယျတောငျထငျတာ.သိလား..ဟှငျ့” လကျလှတျပေးသဖွငျ့ စိုငျးအိုငျစတိုငျဘောငျးဘီထဲသို့သူ့ညီငယျကို ပွနျထညျ့ရငျးဘောငျးဘီဇဈကိုပွနျတပျ ခါးပတျပွနျဝတျလိုကျ သညျ။ဆကျတီထိုငျခုံကို ထိုငျးရငျးခါးဆနျ့ကာ အကြီ၊ဘောငျးဘီကို သသေသေပျသပျ ဖွဈအောငျ လကျနှငျ့သပျသပျခနြသေညျ။သနျး သနျးကတော့ ကွမျးပွငျမှ ထပွီးစိုငျးအိုငျဘေးတှငျဝငျထိုငျလိုကျခါ စိုငျးအိုငျးပေါငျလုံးကိုလကျဖွငျ့ပှပျနသေညျ။ “မသနျးကလဲပွော တော့မယျ..
အပြိုရညျမပကျြသေးဘူး.မှုတျတာကအရငျလုပျတာလား..ဟဲ..ဟဲ” သနျးသနျးကမကျြတောငျတုကွောငျ့ညို့နသေောသူ့ မကျြလုံးကိုထောငျ့ကပျကာ မကျြစောငျးလှမျးထိုးရငျး “အငျးလေ..ဘာဖွဈလဲ..ကြှနျမအပြိုဖွဈကတညျးက ဦးလေးကမှုတျခိုငျး တာ..သူ့အိမျမှာနရေတော့ ကွောကျကွောကျနဲ့လုပျပေးရငျး …အကငျြ့ဖွဈသှားတာ..နောကျတော့အလိုးမခံရလဲ မှုတျပေးရရငျ ကြှနျမကတော့ ပီးသှားတာပဲ” “ဦးလေးကအရငျးလား…” “ဝမျးကှဲပါ..သူကမိနျးမရှုပျတယျလေ..သူ့မိနျးမကလညျးသူ့ကိုအရမျး ကွောကျတာ..၊ကြှနျမ.ငယျငယျကဆို အခနျးထဲကနေ ..ဒျေါဒျေါ့ကို ရိုကျတဲ့အသံကိုကွားကွားနရေတယျ၊သူ့အိမျမှာ နရေတာငရဲ ရောကျနသေလိုပဲ” “မသနျးငယျငယျတုံးက တျောတျောခံစားရမှာပဲနျော” သနျးသနျးလကျမောငျးကိုလကျဖွငျ့ဖကျလိုကျပွီး သနျးသနျး ခေါငျးကိုသူ့ပခုံးပျေါစိုငျးအိုငျမှီစလေိုကျသညျ။ သနျးသနျးကလညျးရငျဖှငျ့ရမယျ့သူအနားရှိနသေဖွငျ့ သူမငယျစဉျကအကွောငျးကို စိုငျးအိုငျကိုပွောပွသညျ။ “စိုငျးရယျ..ကြှနျမငယျငယျတညျးကမိဘတှမေရှိကွတော့..အမြိုးတှကေတလှညျ့ဆီလိုကျနရေတယျ၊
အမြိုးတှကေလညျးမတကျသာလို့သာချေါထားရတော့..ကြှနျမကိုဟိုလူ့ဆီပို့၊ဒီလူ့ဆီပို့နဲ့ပေါ့၊ တခြို့ကလညျးချေါထားခငျြပေ မယျ့..ဆငျးကလညျးဆငျးရဲ..ကလေးကလညျးမြားဆိုတော့..မချေါထားနိုငျ ခမျြးသာတဲ့အမြိုးတှကေလညျး..မချေါခငျြ.၊ဒီလိုနဲ့ ဟိုလူ့ အိမျမှာတဈနှဈနလေိုကျ ဒီလူ့အိမျမှာခဏနလေိုကျ နဲ့ အရှယျရောကျတဲ့အထိပါပဲ..ကြောငျးတောငျမှကောငျးကောငျးမတကျခဲ့ရပါဘူး၊ တဈခါတလေ အိမျတအိမျ မှာလေးငါးရကျနပွေီး ကြှနျမကို နောကျတဈအိမျကို ပို့လိုကျတာပဲ..ဘယျအမြိုးအိမျလား..တဈစိမျးအိမျ လား တောငျမသိတော့ပါဘူး….စိုငျးရယျ..အရှယျရောကျလာတော့ပိုတောငျဆိုးသေး…ဘယျသူမှလကျမခံခငျြတော့ ဘူး… တဈခါတလေ..
အိမျတအိမျကိုလိုကျပို့ ..ဟိုးအဝေးကွီး လမျးလြှောကျ ရောကျပွီဆိုရငျ အဲဒီအိမျက လကျမခံရငျ ကြှနျမကိုအုပျထိနျး တဲ့သူက ဆူအောငျ့ပွီးသူ့အိမျကိုပွနျချေါ ဗိုကျကလဲဆာ..ဘာမှလဲမကြှေးဘူး တဈလမျးလုံး ဗိုကျခေါကျဆှဲလိမျလိုကျ ခေါငျးခေါကျ လိုကျနဲ့ ကြှနျမမှာ အိမျရောကျတဲ့အထိကိုယျ့အထုပျကိုယျ ဆှဲပွီးလိုကျရတာ..အိမျပွနျရောကျတာနဲ့အရိုကျခံရ..နောကျတဈအိမျ ရောကျလညျး..အရိုကျခံရနဲ့.. အရှယျရောကျတဲ့အထိပါပဲစိုငျးရယျ..” “မသနျးဘဝ..ကတျောတျောဆိုးတာပဲနျော..နောကျဘယျလို ဆကျဖွဈသေးလဲ”
“ဟငျး…..ကြှနျမ.အပြိုအရှယျရောကျတော့..ကြှနျမကို အုပျထိနျးတဲ့သူက ကြှနျမဦးလေးဆိုတဲ့သူဆီလိုကျပို့ တယျလေ..ကြှနျမမှာ အဝတျထုပျလေးကိုငျပွီး သူ့အိမျပျေါတကျတာတာနဲ့ဆုတောငျးလိုကျရတာ ကြှနျမကို.ချေါပါစဆေိုပွီး..နို့မို့ဆိုပွနျရငျအရိုကျခံရမှာ လေ..သူတို့လူကွီးနှဈယောကျစကားပွောကွပီး ကြှနျမကို ဦးလေးက အနားချေါပွီး စူးစူးရဲရဲကိုကွညျ့တာ ၊နောကျလှညျ့ပွစမျးဆို တော့နောကျလှညျ့ပွရသေး တယျ…၊ကြောခိုငျးပွီးလမျးလြှောကျပွစမျးဆိုတော့ လမျးလြှောကျပွရတာပေါ့၊ နောကျသူကလကျခံ လိုကျပွီဆို တော့ ဝမျးသာလိုကျတာ..ကြှနျမကိုအရငျအုပျထိနျးတဲ့အဒျေါကွီးပွနျသှားတော့မှ ကြှနျမကိုကောငျးကောငျး ဆကျဆံ တော့ဒါပဲ..အဲဒီနကေ့စပွီး ကြှနျမဘဝတဆဈခြိုးတာပဲ..ရှငျ” သနျးသနျး ဦးလေးဆိုသူအိမျကို စရောကျကတညျးက အရငျအိမျမြားလို အိမျအလုပျကိုအောကျခွသေိမျးအကုနျလုပျပါသညျ။ဒါပမေယျ့ ထိုအိမျရောကျကတညျးက သနျးသနျးနစေ့ဉျ ငိုကွှေးနရေ တော့သညျ။
အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော..ဦးလေးလုပျသူ ဦးမွငျ့ဝမှော သူမကိုအကွောငျးမရှိအကွောငျးရှာ ရိုကျနှကျတကျသောကွောငျ့ဖွဈ ပါသညျ။သူမမှာ ဘယျသို့ပငျ အကောငျးလုပျစခေါမူ ဦးမွငျ့ဝေ၏လကျဝါးကွမျးကွီးမြားဖွငျ့ တငျပါးနှငျ့ကြောပွငျကို တဈနသေုံ့း လေးကွိမျ လောကျအဆျောခံရတကျသညျ။ကံမကောငျးလငျြ တံမကျြစညျးရိုးနှငျ့ ခွသေလုံးကို မကျြရညျပေါကျပေါကျကလြာသညျ အထိ ရိုကျတကျသညျ။သို့သျော သနျးသနျးကံကောငျးသညျက ဦးမွငျ့ဝမှော သူမကိုကြောငျးထားပေးသညျ။အစားအသောကျလဲ ကောငျးမှနျစှာကြှေးသညျ။မုနျ့ဖိုးကိုလဲ တျောတျောမြားမြားပေးတကျသညျ။သနျးသနျးမှာ ဘယျလောကျရိုကျရိုကျ ဒီအိမျမှာအသားကြ လာသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ သူမကိုနောကျအိမျကို ပို့မှာတောငျစိုးရိမျလာမိသညျ။
ဦးမွငျ့ဝတှေငျ သူ့မိနျးမ ထားဝရှေိသျောလညျး တဈခါတရံ တဈပတျဆယျရကျ ပြောကျနတေကျသညျ။ဒျေါထားဝပွေောပွသလောကျဆိုလြှငျ ဦးမွငျ့ဝေ တှငျအငယျနှောငျးလို မိနျးမ သုံး လေးယောကျရှိကွောငျးသနျးသနျးအနကွောလာတော့သိလိုကျရသညျ။ သနျးသနျးထိုအိမျတှငျ မှာပဲဆယျတနျးအောငျပွီး ဦးမွငျ့ဝေ က ကြောငျးတကျ အလုပျလုပျရမညျဆိုသဖွငျ့ အဝေးသငျ လြှောကျပွီးစာရငျးကိုငျသငျတနျးကိုလဲတကျရောကျလကျြရှိသညျ။ ဒျေါ ထားဝမှော ဦးမွငျ့ဝကေိုဘုရားတဈဆူကဲ့သို့ခဈြခငျ၊ကွောကျရှံ့သော ရိုးရိုးကွီး အညာသူမိနျးမတဈယောကျဖွဈသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ သေ ဆိုသေ ၊ရှငျဆိုရှငျ ဆိုရမလောကျ ဦးမွငျ့ဝစေကားကို မွဝေယျမကနြားထောငျတကျသူဖွဈ၏။ဒျေါထားဝမှော သနျးသနျးကိုအိမျတှငျ ထားသညျ့ကိစ်စကိုလညျး ဦးမွငျ့ဝသေဘောတဈခုထဲဖွငျ့လကျခံထားသညျ။
ဒျေါထားဝမှော အသားခပျညိုညို ဖငျထှား ရငျကွီး အညာသူဖွဈသဖွငျ့ ဦးမွငျ့ဝေ၏ ပှဲတကျမယားကွီး ရာထူးရနခွေငျးမဟုတျ ကွောငျး သနျးသနျးနားလညျလာသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ ဒျေါထားဝကေို လကျထပျထားခွငျးမှာ သူ့စကားကိုမွဝေယျမကြ နားထောငျတကျ သောအကငျြ့ကောငျးကိုပိုငျဆိုငျထားခွငျးကွောငျ့ဖွဈကွောငျး အရကျကလေးထှလောလြှငျ သူ့မိနျးမကိုဖကျပွီး စစ နတေကျသညျ။ သနျးသနျးမှာ အရှယျရောကျလာပွီဖွဈသျောလညျးလောက သဘာဝကိုနားမလညျသေးသော ထိုအခြိနျက သိုးဖွူမလေးတဈကောငျ သာ ဖွဈနခေဲ့သညျ။ “ဗွနျး” ဦးမွငျ့ဝေ၏လကျဝါးကွမျးကွီးက သနျးသနျးဖငျပျေါသို့ကွမျးကွမျးတမျးတမျးရောကျရှိလာသညျ။စားပှဲ ပျေါလကျဖနောငျ့ကိုတငျခါ ဖငျကိုနောကျသို့တကျနိုငျသမြှကောကျ ထားလိုကျသညျ။အသံကွားလိုကျရသျောလညျး ဖငျသားတဈခု လုံးကနာကငျြမှုကို စစခငျြး မခံစားရ၊နောကျပိုငျးမှ တဖွညျးဖွညျး တငျးခံလာခါဖငျနှဈခွမျးလုံးနာကငျြလာသညျ။ သို့သျောသနျးသနျး မှာ ဒီပုံစံကို လုံးဝမပွောငျးရဲ၊ ဦးမွငျ့ဝကေတော့ ကျောဖီခှကျကို အသာမပွီး သနျးသနျးပုံစံကို ကျောဖီနှငျ့အတူအရသာခံနသေညျ။
မနကျခွောကျနာရီလောကျ ဒျေါထားဝေ ဈေးသှားလြှငျ ဦးမွငျ့ဝေ၏ သနျးသနျးအပျေါ မနကျပိုငျးရိုကျနှကျခကျြဖွဈသညျ။သနျး သနျး၏ လုံးဝွပငျမရသော ပွဈခကျြကွောငျ့ ထိုသို့မနကျတိုငျးရိုကျနှကျခံရခွငျး ဖွဈသညျ။ အပွဈက ရှငျးပါသညျ။ အရှယျရောကျ လာကတညျးက သနျးသနျးအပွဈကွီးစဖွဈ ပါသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ ပွောသောသနျးသနျး၏အပွဈကွီး မှာ သူမဖငျမှာ လိုသညျထကျ ကောကျပွီး၊ ခါလို့ဖွဈသညျတဲ့။ သနျးသနျးမှာ ဘယျလိုပငျကွိုးပမျးသျောလညျး ဦးမွငျ့ဝေ လကျဆကို ဖငျကတောငျးဆိုနသေလို ပို လို့တောငျကွီးလာ၊ကောကျလာ နသေညျ။ ယခုမနကျက ပိုပွီးအပွဈကွီးသှားသညျ။ဘာကွောငျ့ဆိုသျော အိပျယာထနောကျကြ သဖွငျ့ ကမနျးကတနျးပွငျဆငျလိုကျရာ ဆာစပိုငျဒါဝတျရနျမလေ့ာသညျ။ ဦးမွငျ့ဝေ ကို ကျောဖီပွငျပေးရငျး ထုံးစံအရ ဦးမွငျ့ဝကေ သူမကိုလှညျ့ခိုငျးပွီး ဖငျကိုရိုကျမလို့ လုပျခြိနျမှာ ဆာစပိုငျဒါ မဝတျထားကွောငျးသိသှားပွီး သူမကိုဒါဏျပေးလို့ စလိုကျတာ ဖွဈကွောငျး သနျးသနျးအရိုကျခံရငျးသိလိုကျရသညျ။ ရိုကျသာရိုကျလိုကျရသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ စိတျထဲတှငျလကျဖဝါးကိုသနျးသနျးဖငျ ပျေါမှမခှာခငျြအောငျ ရိုကျရငျးနဲ့သိလိုကျရသညျ။
သနျးသနျးကို ဖငျတောငျ့မှနျးသိသျောလညျး ဒီနမှေ့ အတှငျးခံမဝတျ လားလို့လား မသိ၊အငျမတနျအတှကေ့ောငျးနသေညျ။ ဦးမွငျ့ဝေ ပုဆိုးအောကျကလီးကလညျး ဒီနမှေ့ ခံတှငျးတောငျးနသေညျ။ မတျတောငျနတောမြား သဈငုတျကိုထောငျထားသလားမှတျရ အောငျ မာတငျးလို့နသေညျ။အခြိနျပွညျ့ကိုယျ့မကျြစိ အောကျမှာရှိနလေို့လားမသိ အရငျတုနျးက ဦးမွငျ့ဝေ သနျးသနျးကိုနှိပျစကျခဲ့ တာတှကေ ကြားသဘာဝ ရိုကျခငျြနှကျခငျြစိတျကိုထှကျပေါကျ ပေးနညျးတဈမြိုးလို ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ ဒီမနကျမှ ထူးထူးခွားခွား သနျး သနျးဖငျကိုရိုကျလိုကျပွီးမှ စိတျကရိုကျခငျြတာထကျ ကိုငျခငျြတာကပိုမြားလာသညျ။ကျောဖီခှကျကို အသာခရြငျး သူဖငျရိုကျတာကို ခံဖို့ကော့ပေးထားသော သနျးသနျးဖငျလုံးကိုအရသာခံကွညျ့နသေညျ။
“မိသနျး” “ရှငျ” မကျြလုံးလေးဝိုငျးဝိုငျးနှငျ့ သနျးသနျး ဦးမွငျ့ ဝေ ချေါသညျကိုလှညျ့ထူးလိုကျသညျ။တဈခကျြအရိုကျခံလိုကျရကတညျးက ဖငျတဈခုလုံး ပူတငျးလာပွီး နာလာသဖွငျ့ မကျြရညျက လညျးဝိုငျးနသေညျ။ “သှားစမျး..နငျ့ကိုရိုကျနကြေ တုတျကိုယူလာခဲ့” သနျးသနျးစိတျထဲ တုနျခနဲတောငျဖွဈသှားပွီး မကျြရညျက ပေါကျပေါကျ ကလြာသညျ။သူမကို ဦးမွငျ့ဝေ လကျဖွငျ့သာအမြားဆုံးရိုကျလရှေိ့သညျ။တုတျဖွငျ့မရိုကျတာ နှဈနဲ့ခြီကွာနပွေီ၊အခု တော့ ဖငျသားတဈခုလုံးနာနမှေ တုတျနဲ့ထပျအရိုကျခံရမယျဆိုတော့ တှေးရငျးနဲ့တောငျဒူးတုနျလာသညျ။ဒါပမေယျ့ ဦးမွငျ့ဝေ အမိနျ့ ကို သနျးသနျးလှနျဆနျနိုငျစှမျးမရှိပါ။သူပွောသညျ့အတိုငျး မီးဖိုခြောငျ ထောငျ့တှငျထောငျ ထားသောကွိမျလုံးကိုယူပေးလိုကျသညျ။
ဦးမွငျ့ဝလေကျထဲကို ကွိမျလုံးထညျ့ပေးပွီး နောကျနညျးနညျးဆုတျပွီးရပျနလေိုကျသညျ။ “မိသနျး နငျဒီတုတျနဲ့ရိုကျတာခံမလား၊ ငါ့ တုတျကို စုပျမလား ” ဦးမွငျ့ဝမေတျတပျရပျလိုကျပွီး ပုဆိုးဖွညျပွလိုကျသညျ၊ မညျးနကျကာ အကွောမြားဖောငျးတကျနသေောလီး ကို အမှေးကောကျကောကျမြားကွားမှ ကွောကျမကျဖှယျမွငျလိုကျရသညျနှငျ့သနျးသနျး မှာ အညှို့ခံလိုကျရသလို မကျြလုံးမြားက ဦးမွငျ့ဝအေောကျပိုငျးကို ဆှံ့အစှာ ငေးမောနမေိသညျ။ “ပွောလေ နငျ ဘယျတုတျကွိုကျလဲ …ရှမျး..” ဦးမွငျ့ဝကေ ပွောပွောဆိုဆို လကျထဲရှိကွိမျလုံးကို လထေဲသို့ဝှရေ့မျးလိုကျသညျ။ကွိမျလုံးသံကွောငျ့သနျးသနျး ၏တှဝေနေသေောစိတျမှာ ဦးတညျရာတဈခုစီသို့ စိတျရှိတော့သညျ။ပုဆိုးခြှတျခထြားသော ဦးမွငျ့ဝေ အောကျကိုဒူးတုတျခရြငျး ဦးမွငျ့ဝပေေါငျကိုလကျဖေါငျးဖေါငျးဖွငျ့ လှမျး ကိုငျလိုကျသညျ။
“ဦး တုတျကိုစုပျပါ့မယျ..ရှငျ..မရိုကျပါနဲ့..ဟငျ့..ဟငျ့..ကွောကျလို့ပါ…ဦးရယျ..သမီးကိုမရိုကျပါနဲ့နျော..ဦးတုတျကိုပဲ ပါးစပျနဲ့စုပျပေးပါ့မယျ..ဟငျ့..ဟငျ့…” “အေး…ကောငျးကောငျးစုပျပေးစမျး..နောကျဆို ငါ့လီးကို နငျကောငျးကောငျးစုပျပေးရငျ နငျ့ ကို..ငါမရိုကျတော့ဘူး..” “ဟငျ့..ဟငျ့..တ..ကယျ.ပွောတာလား..ဦး..သမီးကို..တကယျ..မရိုကျတော့ဘူးနျော…စုပျမယျ..စုပျမယျ..ဦး သေးပေါကျရငျတောငျ စုပျပေးပါ့မယျ..ဦးရယျ..သမီးကိုမရိုကျပါနဲ့..နျော” “အေး…မိသနျးနငျလိမ်မာတယျ..လာ ဦးလီးကိုစုပျ…သမီး ကို..လရညျအမြားကွီး ကြှေးမယျ..အငျး..ဟုတျတယျ” ဦးမွငျ့ဝေ သနျးသနျးခေါငျးကိုကိုငျပွီး သူ့လီးကို သနျးသနျး၏ဟထားသော နှုတျခမျးပေါကျထဲသို့အသာထိုးသှငျးပွီး ရှတေို့းနောကျငငျဖွငျ့ သနျးသနျးပါးစပျကိုလိုးနတေော့သညျ။သနျးသနျး လညျး သူမ ပါးစပျ ပေါကျထဲရှိ ဝငျနသေမြှလထဈကို အထဲမှ လြှာဖွငျ့သိမျးသိမျးပွီးလကျြပေးနသေညျ။
အစပိုငျး သနျးသနျးမညျသို့လုပျရမညျကိုမသိပေ မယျ့ ပါးစပျထဲလီးတဈခြောငျးလုံး တိုးဝငျလှုပျရှားနေ မှုကွောငျ့ မ သဘာဝ လုပျပေးနရေငျး လကျဖွငျ့ နှုတျခမျးအပွငျရောကျနေ သော လီးခြောငျးကိုဂှငျးတိုကျပေးတကျလာသညျ။နောကျပိုငျး ဦးမွငျ့ဝေ ခါးကိုလှုပျစရာမလိုတော့ပဲ သနျးသနျးခေါငျးကသာ ဦးမွငျ့ ဝေ ပေါငျကွားထဲမှာသာ တဈလှုပျလှုပျဖွဈနတေော့သညျ။ “မိသနျး..ကောငျး..တယျ..တောကျ…စုပျစုပျ…အေး..ကောငျမ..စုပျ စမျး….ငါ့လရညျတှအေကုနျထှကျအောငျစုပျစမျး…တျောတယျ..နောကျဆို နငျ့ပါးစပျထဲ သေးပါပေါကျထညျ့ပေးမယျ…စုပျ…အား…” ပွောဆိုညညျးညှုနရေငျး ဦးမွငျ့ဝေ လီးမှလရညျ ပွဈပွဈမြား သနျးသနျးပါးစပျထဲသို့ ပနျးထှကျကုနျသညျ။လရညျထှကျထှကျ ခငျြး..ဦးမွငျ့ဝကေ သနျးသနျး ခေါငျးကိုနောကျသို့တှနျးပွီး လီးကိုကိုငျခါ သနျးသနျးမကျြနှာနှငျ့ ပါးပွငျပျေါသို့သာ ပနျးထုတျနလေိုကျ သညျ။
ပွဈနှဈနသေော လရညျမြားက သနျးသနျးနှုတျခမျးမှာနှငျ့ မကျြနှာအနှံ့စီးကသြှားသညျ။မကျြလုံးကိုအသာမှေးပွီး ဦးမွငျ့ဝေ လုပျကိုငျသမြှကို ခေါငျးလေးမော့ကာ သနျးသနျးငွိမျခံနလေိုကျသညျ။ “ဟငျ..ကိုမွငျ့..ဘာဖွဈနတောလဲ….” ထိုအခြိနျ ဒျေါထား ဝေ၏အသံကို သူတို့နှဈယောကျလုံး ကွားလိုကျရသညျ။ထိုအခြိနျ ဒျေါထားဝေ၏အသံကို သူတို့နှဈယောကျလုံး ကွားလိုကျရသညျ။ ဒျေါထားဝေ မွငျလိုကျရသညျက သူ့လငျတျောမောငျ ဦးမွငျ့ဝသေညျပုဆိုးမရှိပဲ လရညျမြားကိုသူ့အိမျတှငျခိုငျးသောကောငျမလေး မကျြနှာပျေါသို့ လီးခြောငျးကိုကိုငျပွီး ပနျးထုတျနသေညျကိုထိတျလနျ့ဖှယျတှလေို့ကျရသညျ။မိသနျးက လညျးမကျြလုံးလေးမှေးပွီး အရသာခံနပေုံနှငျ့ ဒျေါထားဝစေိတျထဲ မနာလိုစိတျက တဖှားဖှားဝငျလာတော့သညျ။ဒျေါထားဝအေသံကွောငျ့ သနျးသနျးမှာ ပွာပွာ သလဲဖွဈသှားပွီး အထိတျထိတျအလနျ့လနျ့ဖွငျ့ မတျတပျရပျခါ မကျြလုံးအကွောငျသားဖွငျ့ ဒျေါထားဝကေို ငေးမောကွညျ့နေ မိသညျ။
ပါးစပျကတော့ ပွောစရာစကားလုံးရှာမရသလို နှုတျခမျးတလှုပျလှုပျဖွဈနတေော့သညျ။ဦးမွငျ့ဝကေတော့ ဒျေါထားဝကေို နိုငျနကွေမို့ တဈခကျြခေါငျးငဲ့ကွညျ့ယုံမှအပ သိပျအရေးမစိုကျလှပဲ ပုဆိုးကိုအသာကောကျဝတျနသေညျ။ “ကိုမွငျ့…ကြှနျမကိုရှိ သေးတယျလို့အောကျမသေ့ေးလား..ဟငျ..အမလေးဖွဈနလေိုကျကွတာ..အရှကျမရှိ.မနကျစောစောကို..ပွောပါအုံး..ကိုမွငျ့..ကြှနျမ ကို..သအေောငျသတျနတောလား..” “ဟာ..ကှာ..စကားမြားလိုကျတာ..ငါဘာလုပျနလေို့လဲ..” “ဟငျ..ဘာလုပျနတောလဲ..ဟတျ လား..ရှငျ့…မိနျးမတဈယောကျလုံး အိမျပျေါမှာရှိနတောတောငျမှ..အိမျကခိုငျးတဲ့ကောငျမကို မှုတျခိုငျးနတော…ကြှနျမကိုစျောကားနေ တာလား..” “မငျးကှာ..အရေးမပါတာတှလောပွောနတေယျ…ငါ.ဘာသာ.ဘာလုပျလုပျနငျ့ဆီငါက အရငျခှငျ့တောငျးရအုံးမှာလား… ဟငျ…တောကျ..ငါ့ကိုစိတျတိုနအေောငျလုပျတာလား..ထားဝေ” ဦးမွငျ့ဝကေ ပွောပွောဆိုဆိုသူ့မိနျးမ ဒျေါထားဝလေကျမောငျးကို ဆုတျကိုငျလိုကျသညျ။
အသားနာသှားသဖွငျ့ ဒျေါထားဝစေိတျထဲ မနာလိုစိတျ၊ရနျဖွဈခငျြစိတျ ကပြောကျသှားပွီး ဦးမွငျ့ဝကေို ကွောကျနကွေစိတျကပွနျလညျစိုးမိုးလာသညျ။အစက မိနျးမသားပီပီ တဈသကျလုံးမျောမကွညျ့ရဲသော ယောကျြားကိုရနျတှမေိ့ သျောလညျး လကျမောငျးနာလိုကျသညျနှငျ့ပုံမှနျ စိတျဆီသို့ပွနျရောကျသှားသလို ဦးမွငျ့ဝကေို လနျ့ပွီးမျောကွညျ့မိသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ၏ ရိုကျနှကျတကျသော အကငျြ့ကိုလညျးမိမိကိုယျတိုငျခံစားဖူးသဖွငျ့ ကိုယျ့အခွနေကေို ကိုယျနားလညျသှားသညျ။ “ဟငျ..ပွော လေ..ဘာငါ့ကို ကွောငျပွီးကွညျ့နတောလညျး..ဟာကှာ…ဖွနျး…” ဒျေါထားဝေ ပါးကိုဖွတျရိုကျခံလိုကျရသဖွငျ့ခေါငျးလညျသှားပွီး ကွမျးပျေါသို့ ပုံကသြှားသညျ။ဦးမွငျ့ဝကေ ရိုကျရတာမဝသေးသညျ့အလား ဒျေါထားဝဖေငျကိုဖွတျကနျသညျ။
“ဖောငျး…” အသံက ဟိနျးထှကျလာပွီးဒျေါထားဝခေမြာ..ကွမျးပျေါသို့သုံးလေးပတျလိမျ့သှားသညျ။နောကျ ဦးမွငျ့ဝကေဒျေါထားဝေ ကိုယျပျေါတကျခှပွီး ပါးကိုဘယျပွနျညာပွနျရိုကျတော့သညျ။ “ဖွနျး..ဖွနျး..ဖွနျး…ဖွနျး…ဖွနျး…. မှတျပါလား..နောကျလငျကို ခံပွောအုံးမလား..ပွော စမျး..” “ကွောကျပါပွီ..ကိုမွငျ့ရယျ..ဟီး..ဟီး..ကြှနျမရှိကွီးခိုးပါတယျ..နောကျမပွောတော့ပါဘူး… ဟီး..” “ဘာ ခုမှကွောကျပါပွီ လဲ..ကောငျမ နငျ့မှတျလောကျအောငျဆုံးမရမယျ…ကဲ..ဖွနျး..ဖွနျး..ဖွနျး..ဖွနျး……” ဦးမွငျ့ဝေ၏ လကျဝါးက ဆကျတိုကျဆိုသလို ဒျေါထားဝမေကျြနှာပျေါသို့အဆကျမပွတျကလြာသညျ။ ဒျေါထားဝခေငျမြာ ..ဦးမွငျ့ဝလေကျမကျြနှာပျေါမကအြောငျတကျမမြှကာ ကှယျရငျး ဆံပငျဖှာလံကွဲခါအကြီကွယျသီးမြားက ပွုတျထှကျကုနျသညျ။ထမီအထကျဆငျကလညျး လြော့ရဲလာပွီးထမီက ပွေ လာသညျ။ထိုအခြိနျ ဦးမွငျ့ဝေ ဒျေါထားဝကေိုယျပျေါခှထားသညျကိုဖွလေိုကျရငျး မတျတတျရပျလိုကျသညျ။ထခါနီးဖငျကို နှဈခကျြ လောကျပိတျကနျခံလိုကျရသေးသညျ။
“ထစမျး..ထားဝေ ” ဦးမွငျ့ဝေ ငေါကျလိုကျသညျနှငျ့ တရှုတျရှုတျငိုနသေော ဒျေါထားဝေ ခမြာ.အထကျဆငျစကို စုံကိုငျ ပွီးအားတငျးကာထရပျလိုကျသညျ။ “နငျက ..ငါ့လရညျတှသေူမြားပေးတာမကွိုကျဘူးဆို တော့နငျ့ပဲ ကြှေးရတော့မှာပေါ့…သှား..မိသနျးမကျြနှာပျေါကငါ့လရညျတှကေုနျအောငျ လြှာနဲ့သှားရကျစမျး….ဖွောငျး..” ပွောပွောဆိုဆို ဒျေါ ထားဝဖေငျကိုလကျနှငျ့အားပွငျးပွငျး ပိတျရိုကျလိုကျပွီး သနျးသနျးဆီတှနျးလှတျလိုကျသညျ။ကွောငျပွီး ဦးမွငျ့ဝေ လုပျနသေမြှငေး ကွညျ့နသေော သနျးသနျးလညျး သူ့ရှတေ့ညျ့တညျ့ရောကျလာသောဒျေါထားဝကွေောငျ့သတိပွနျဝငျလာသညျ။ဒျေါထားဝကေ သနျး သနျးထကျလူကောငျထှားပွီးအရပျမွငျ့သဖွငျ့ သနျးသနျးအပျေါမိုးနသေညျ။ “မိသနျး..နငျ့အနျတီထမီကို ခြှတျပေးလိုကျ” ဦးမွငျ့ဝေ ပွောလိုကျသဖွငျ့သနျးသနျးခမြာ ဒျေါထားဝကေိုမကွညျ့ရဲကွညျ့ရဲ ကွညျ့လိုကျပွီး လကျက စုကိုငျထားသောဒျေါထားဝထေမီဆီသို့ လှမျးလိုကျသညျ။ဒျေါထားဝမှောလညျး သနျးသနျးလကျသူ့ထမီကို စခြှတျကတညျးကဘာလုပျရမညျမှနျးမသိပဲ ယောငျပွီးလှတျပေး လိုကျသညျ။ညိုညကျပွီး ပွောငျတငျးနသေော ဒျေါထားဝေ၏ ဖငျလုံးအိုးမှာ ထယျဝါစှာပျေါထှကျလာသညျ။
“ထားဝေ..ဘာလုပျနေ တာလဲ..မိသနျးမကျြနှာပျေါက ငါ့လရညျတှကေိုလကျြလေ..ထပျနာခငျြလို့လား” ဦးမွငျ့ဝေ ငေါကျလိုကျသံကွောငျ့ဒျေါထားဝေ လြှာ ကိုအပွားလိုကျထုတျပွီး သနျးသနျးနှာခေါငျးနားရှိ ဖွူဖွူပွဈပွဈ လရညျအခြို့ကိုလကျြရနျအားထုတျလိုကျသညျ။ “မိသနျး..နငျ့လကျ ကိုသုံးပွီး ထားဝစေောကျပတျကို လကျနှိုကျပွီးပှတျပေးလိုကျ.သူနငျ့မကျြနှာပျေါကလရညျအားလုံးကုနျသှားတာနဲ့သူပွီးသှားတာ ..ငါ မွငျခငျြတယျ.သူမပွီးလို့ကတော့..ကွိမျလုံးစာမိပွီသာမှတျ” ဦးမွငျ့ဝေ၏ခွိမျးခွောကျသံကွောငျ့ သနျးသနျးသူ့လကျကို ဒျေါထားဝေ စောကျခေါငျးပေါကျဆီသို့ ထိုးနှိုကျခါသှကျသှကျလေးလှုပျရှားလိုကျသညျ။ဒျေါထားဝကေလညျး လြှာကိုအပွားလိုကျသူ့မကျြနှာပျေါ ကလြာသောအခါ သူမနှာခေါငျးနားက လရညျအခြို့ကဒျေါထားဝေ၏လြှာပျေါ ဝဲခိုကာ ပါသှားသညျကိုတှလေို့ကျရသညျ။သုံးလေး ခကျြ လကျြလိုကျသညျနှငျ့ ကုနျသှားတော့မညျ့လရညျကွောငျ့ သနျးသနျးနောကျတဈကွိမျ ဒျေါထားဝလြှော ကသူမ မကျြနှာနားကပျ လာသညျနှငျ့ နှုတျခမျးဖွငျ့လှမျး စုပျထားလိုကျတော့သညျ။
“အငျ့..အငျး…အငျး…ပွှတျ..” ဒျေါထားဝလေညျး မထငျမှတျပဲ သနျးသနျး နှငျ့ နှုတျခမျးခွငျး တစေု့ပျမိကွသညျ၊လြှာခွငျးလညျး ပှတျတိုကျမိကုနျသညျ။ နူးညံ့လှနျးသောအတှကွေ့ောငျ့ နှဈယောကျသားထို အတှပေ့ျေါ သာယာသှားကွသညျ။ဒျေါထားဝကေ သူ့လကျကို သနျးသနျးကြောကို ပှဖေ့ကျလိုကျရငျးသနျးသနျးလြှာကိုဆှဲစုပျနေ တော့သညျ။သနျးသနျးကတော့ ဦးမွငျ့ဝမှောထားသညျ့အတိုငျး ဒျေါထားဝနှေငျ့နမျးစုပျနရေငျး ဒျေါထားဝစေောကျပတျအကှဲကွောငျး ထဲလကျခြောငျးကို ထိုးထညျ့ရငျးခပျစိပျစိပျ လေးပှတျပေးနေ၏။ နှဈယောကျသားနမျးရှုပျနသေညျကို ဦးမွငျ့ဝကေ ခပျအေးအေး ကုလားထိုငျပျေါ ထိုငျရငျးကွညျ့နလေိုကျသညျ။ဒျေါထားဝကေလညျး သူ့ဝတ်တရားကိုမမပေ့ါ၊ သနျးသနျးနှုတျခမျးက လှတျသညျနှငျ့ သနျးသနျးမကျြနှာပျေါက လရညျကိုရသလောကျသိမျးလကျြလိုကျသေးသညျ။ထိုသို့လုပျသညျနှငျ့ သနျးသနျးကလညျး လကျကိုလေး ခြောငျးပူးလောကျသူ့စောကျပတျထဲ စုံထညျ့ပွီး ပွငျးပွငျးထနျထနျ မှတေော့သညျ။
“အ..အငျး..ဖွညျး..ဖွညျး..ရှီး..အ..အငျ့..မွနျမွနျ လုပျ…အငျး..ဟုတျပွီ..အီး….အ..အ…” သနျးသနျး၏ထိုးမှကေစားမှုကွောငျ့ ဒျေါထားဝေ ဖငျသားတဈခုလုံးကောကျခြိတျကာ ကော့လနျနသေညျ။လရညျကိုတော့ကောငျးကောငျးမလကျြနိုငျတော့ လြှာကိုသာအပွငျဘကျထုတျခါ ဝခေ့ါ ဝိုကျခါနှငျ့ သနျးသနျး စောငျးတိုကျသညျ့ ဝဒေနာကိုခံစားနသေညျ။သိပျတျောမကွာလှသညျ့အခြိနျအတှငျ့း ဒျေါထားဝေ ပေါငျကွားမှ စောကျရညျမြားတဈ ဗွဈဗွဈ ထှကျလာပွီး ဒျေါထားဝခေေါငျးမှာ သနျးသနျးပုခုံးပျေါ သို့မှီနှဲ့ကာကသြှားသညျ။ နောကျမှ ဒျေါထားဝအေသကျကို ဖုတျလိုကျ ဖုတျလိုကျရှုရငျး အမောပွေ သနျးသနျးပါးပျေါမှ ဖွူပွဈပွဈလရညျကို လကျြလိုကျကာမွိုခလြိုကျသညျ။ “ဖွနျး…” “အား..” အားပါ လှသော ဦးမွငျ့ဝေ၏လကျဝါးခကျြကွောငျ့ ဒျေါထားဝေ အငျမတနျနာကငျြပွီးလနျ့ခါအျောမိသညျ။မိမိဖငျကို ရိုကျရုံတငျမက ဖငျသား ကွားထဲသို့လကျဝါးစောငျးထိုးခှဲပွီး ဖငျပေါကျကိုပါစမျးလာ သဖွငျ့လငျဖွဈသူ ဦးမွငျ့ဝေ ဘာလိုသညျကို သိသော ကြှနျမယား ကောငျးပီပီ လကျကသနျးသနျး ကိုယျလုံးကိုစလှယျသိုငျးဖကျခါ ခွထေောကျနောကျဆုတျပွီး ဖငျကုနျးပေးလိုကျသညျ။
ပထမ ဦးဆုံး ဦးမွငျ့ဝေ လကျမတုတျတုတျက ဖငျဝကိုပှတျသပျရငျး လကျလေးခြောငျးက မိမိစောကျပတျကိုပှပျသတျကာ စောကျရညျမြားပကြေံ နမှေ လကျနှဈခြောကျးပူးကို ဖငျပေါကျထဲတဈဆဈခွငျးထညျ့လိုကျသညျ။ “အငျး………”ဒျေါထားဝေ ၏သကျပွငျးခသြံက တိုးညှငျး စှာ ပျေါထှကျလာသညျ။ဖငျခံနကေမြို့ ဖငျဝကိုလညျး ဖှငျ့ပေးတကျသညျ။လကျခြောငျးမြားတဈဆဈဆဈဝငျလာတိုငျး အသကျကို မှနျ မှနျရှုပွီး စအိုကွောကို လမျးသာအောငျပွုပွငျပေးထားသညျ။နောကျဆုံး လကျခြောငျးမြားဆုံးသှားသညျ နှငျ့ နောကျပွနျဆုတျသှား သညျ၊တဈဝကျလောကျရောကျယုံနှငျ့ အရှိနျပွငျးပွငျးလေးတိုးဝငျလာပွနျသညျ။ နောကျပွနျထုတျပွနျသှငျးနှငျ့ ဖငျပေါကျကယျြလာမှ ဦးမွငျ့ဝကေ သူ့လီးကိုဖငျထဲသို့ အံကွိတျထညျ့သညျ။
အစပိုငျးမဝငျသလိုဝငျသလိုဖွဈရာမှ ဒဈဖွားက စပွီးဖိသိပျကာဝငျသှား သညျ။နောကျပိုငျးကတော့ ပွနျသှငျးလိုကျပွနျထုတျလိုကျဖွငျ့ အခကျြကကြကြစားပေးရငျး ဒျေါထားဝေ အိုးကို လိုးရနျပုံစံရသှား တော့သညျ။ “ထားဝေ..မငျးဖငျကိုငါတဈသကျလုံးခတြာမဝနိုငျဘူးကှာ..တောကျ..မငျး..အိုး …ကစံပဲ..မငျးလဲဖငျခံရတာပြျောတယျမ လား…….သနျးသနျး..သူ့ကိုသခြောထိနျးထား..ငါစလိုးတော့မယျ” “ဗောကျ..ဗောကျ…ဖကျ..အား…အငျး…အ..အ..ဖေါကျ..ဖေါ ကျ..ဖေါကျ..ဖေါကျ.ဖေါကျ.ဖေါကျ..အငျ့..အငျ့..အငျ့.အငျ့.အငျ့.အငျ့.အငျ့..ရှီး..အငျ့..” “ဟငျး..ဟငျး.တောကျ.အ..အ..ဖေါကျ..ဖေါ ကျ….ဖေါကျ..ကောငျးလိုကျတာ..ထားဝေ ဟုတျပွီ ဆှဲပီး ညှဈစမျး..အငျ့ ..” သနျးသနျးမှာ ဒျေါထားဝဖေကျထားသညျကို တောငျ့ ခံထားရငျးသူ့ရှမှေ့လူနှဈဦးလှုပျရှား နသေညျကိုသာ စိတျလှုပျရှားစှာနှငျ့ ကွညျ့နမေိသညျ။
သူမဖငျကိုသာ ဦးမွငျ့ဝကေဒီလို လာလိုး လြှငျဘယျသို့ခံရမညျကို လညျးအသေးစိတျမှတျသားနမေိသညျ။ ဒျေါထားဝကေခေါငျးမော့လိုကျသညျအခြိနျတှငျ တော့သူ့မကျြနှာ မှာနာကငျြခွငျးထကျ ကောငျးလှနျးလှသဖွငျ့ အံကွိတျခံနပေုံကိုမွငျရတော့ ဖငျခံခငျြစိတျကပျေါလာသညျ။ “အငျး..ကောငျးလိုကျတာ ကိုမွငျ့ရယျ လိုးပါ..အငျ့..အငျ့..လိုး..အ.အ.အ.ဖေါကျ..ဖေါကျ…ဖေါကျ..အငျ့..အငျ့..အငျ့……အငျ့……အငျ့… ကို..မွငျ့..ဆောငျ့..ဆောငျ့..အ..အ.” “ကြှတျ..အငျးဟာ..အငျး..ထားဝေ ဟုတျပွီ ..နငျ ဖငျကို လှုပျလှုပျပေး.အငျး..ဖေါကျ..ဖေါ ကျ..ဗေါကျ..ဗေါကျ..” ဦးမွငျ့ဝေ က ဒျေါထားဝခေါးကို ဖွဈထားကာ ဖငျထဲသို့ မိမိလီးဝငျလိုကျထှကျလိုကျ ဖွဈနသေညျကို အခြိနျ အဆမှနျမှနျဖွငျ့ မေးကွောကွီးမြားထောငျကာ ကောငျးကောငျးကွီးသမနသေညျ။တဈခါတရံ စိတျပါ လာလြှငျ ဒျေါထားဝဖေငျသား မြားကို ဆှဲညှဈလိုကျ တဖွနျးဖွနျးရိုကျလိုကျလဲလုပျနသေညျ။သနျးသနျးမကျြနှာကို အားရပါးရ စူးစိုကျကွညျ့ပွီး ဒျေါထားဝဖေငျကို ခြ ရသညျမှာ ဦးမွငျ့ဝအေဖို့ အရသာထူးကွီးဖွဈနေ သညျ။
သနျးသနျးကို လိုးရတာထကျအခုလို စိတျထအောငျလုပျပေးသညျကိုလညျး ပိုမိုနှဈခွိုကျလာသညျ။အခု သူ ဖငျခနြသေညျကိုကွညျ့ရငျးသနျးသနျးတဈယောကျဖငျခံခငျြနသေညျမှာ မကျြနှာပျေါတှငျ အထငျအရှားဖွဈနသေညျ။ဒျေါထားဝကေို ထိနျးပေးထားရငျသူ့လကျက ဒျေါထားဝေ၏ပှငျ့နသေော အကြီကိုလကျနှိုကျပွီး ဘရာစီယာပျေါမှ ဒျေါထားဝနေို့ကို ကိုငျညှဈနသေညျ။ဖငျခံနသေညျ့ဒျေါထားဝကေ နို့ကိုငျခံရတာကို သိသျောလညျးအရသာရှိလှ သဖွငျ့ တဈအငျအငျဖွငျ့သာညီးညူနသေညျ။ဦးမွငျ့ဝေ ဖငျကိုဆယျမိနဈလောကျ တဗေါငျးဗေါငျးခလြိုကျသညျနှငျ့ ဖငျ၏ညှဈအားကို မခံနိုငျတော့ပဲ လရညျမြားဖငျထဲသို့ပနျးထုတျလိုကျတော့သညျ။ “ဟား..ကောငျးလိုကျတာ ထားဝရော ..ဟူး..ငါတျောတျောထှကျ သှားတယျ..ဖွနျး…သှားစမျးထားဝေ ..ဈေးမှာ ဆိတျခွထေောကျသှားဝယျလာခဲ့..ဆိတျခွထေောကျပွုတျနဲ့ငါမနကျစာ စားမယျ..သှား လေ” ဖငျထဲကလရညျ ပနျးထုတျခံလိုကျရခွငျးနှငျ့အတူ စောကျပတျထဲမှ အရညျမြားပနျးထှကျကုနျခါ ပွီးသှားလို့ ဖုတျလိုကျဖုတျ လိုကျဖွငျ့ သနျးသနျးခါးကိုအတငျးဖကျပွီး အမောမှ မပွသေေးခငျဦးမွငျ့ဝပွေောပွော ဆိုဆိုဖွငျ့ သူတငျပါးကို ရိုကျပွီးခိုငျးလိုကျသံ ကွောငျ့ ကွာပှတျစာ မိသှားသောကြေးကြှနျလို ထမီလေးကောကျစှတျကာ မီးဖိုခြောငျမှ ခပျသုတျသုတျလေး ဈေးသို့ထှကျသှား တော့သညျ။
မပွော့တပြော့ဖွဈနေ သောလီး နှငျ့ သနျးသနျးတဈယောကျဦးမွငျ့ဝနှေငျ့ တဈအိမျထဲ ကနျြခဲ့သညျ။ “ကဲသနျးသနျး လီး တော့စုပျပီးသှားပွီ၊ လာ…ငါ..သေးပေါကျခငျြတယျ အိမျသာထဲလိုကျခဲ့..ဒီနကေ့စပွီး နငျက ငါ့ရဲ့ ဆီးအိုးဖွဈသှားပွီ…..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ… ဟဲ….” ထိုနမှေ့စ၍ သနျးသနျးမှာ ဦးမွငျ့ဝေ၏ ကိုယျလုပျတျောလုံးလုံး ဖွဈသှားတော့သညျ။ဒျေါထားဝမှောလညျး ဦးမွငျ့ဝေ ခြိုးထား သဖွငျ့ လုံးဝကိုမလှနျရဲပဲ ဦးမွငျ့ဝစေိတျတိုငျးကြ ဆကျဆံခံနရေသညျ။သနျးသနျးကတော့ ပွောနစေရာမလိုတော့ ဦးမွငျ့ဝေ ၏လူမ ဆနျသော နညျးမြိုးစုံကို ဖွငျ့အလိုးခံ နှိပျစကျခံနရေတော့သညျ။အစပိုငျးကတော့ ဦးမွငျ့ဝမှော သနျးသနျးကိုလိုးဖို့သာ စိတျထကျသနျ သျောလညျး လိငျစိတျပွငျးထနျလာသညျနှငျ့အမြှ သနျးသနျးမှာ အလိုးခံရတာနှငျ့မကာမိအောငျ ရိုကျနှကျခံရတကျသညျ။ နောကျပိုငျး သနျးသနျးမှာ ဦးမွငျ့ဝလေိုးမှာကိုတောငျတှေးကွောကျလာသဖွငျ့ ရှောငျဖယျဖယျလုပျဖို့ကွိုးစားတိုငျးဦးမွငျ့ဝေ၏အရိုကျအနှကျကို ပိုခံရသဖွငျ့ သူ့လီးတောငျတာမွငျသညျနှငျ့ ကုနျးစုပျတာအလအေ့ကငျြ့တောငျဖွဈလာသညျ။
သနျးသနျးမှာ လီးတောငျတာ တှသေ့ညျ နှငျ့မိမိလြှာ ကိုသုံးပွီး ပါးစပျနှငျ့ စုပျပေး ခွငျးဟာ အရိုကျအနှကျခံရဖို့ အနညျးဆုံးဖွဈကွောငျး အတှအေ့ကွုံကသငျခနျးစာပေးထား သဖွငျ့ လရညျထှကျအောငျသာကွိုးစားတော့သညျ။အလိုးခံရသညျထကျ မှုတျပေးခွငျးက မိမိအတှကျပိုသကျသာအမှုတျခံရသူ လညျး ပိုသဘောကြ မရှံတကျလြှငျ အကောငျးဆုံးဖွဈကွောငျး သနျးသနျးမှာ သိလာသဖွငျ့ ဦးမွငျ့ဝေ အနားကပျလာသညျနှငျ့ စိတျထစမေညျ့စကားမြိုးပွောကွားခွငျး၊ပှတျသပျကိုငျတှယျခွငျးကိုပွုလုပျပွီး လီးတောငျသညျနှငျ့ ပုဆိုးလှနျခါ ကုနျးစုပျတကျသညျ မှာ အရသာတောငျဖွဈလာသညျ။ဒျေါထားဝကေလညျး ထိုနသေ့နျးသနျးနှငျ့ စဆကျဆံ ခံလိုကျရကတညျးက ဦးမွငျ့ဝမေရှိလြှငျ ည ဖကျတှငျသနျးသနျးနှငျ့ဒျေါထားဝတေို့ တအိပျယာထဲအတူအိပျကသြညျ။ နလေ့ညျဖကျတှငျ ပငျြးပငျြးရှိလာလြှငျတောငျမှ ဒျေါထား ဝကေ သနျးသနျးထမီကိုလှနျပွီး သနျးသနျးစောကျပတျကို တကျလကျြတော့သညျ။
သနျးသနျးမှာ တခြိနျထဲ စောကျပတျအလကျြခံ ရတကျပွီး လီးစုပျပေးရသညျ့နမြေို့းလညျးရှိလာသညျ။တျောသေးသညျက သနျးသနျးမှာ လူမွငျတငျ့တယျအောငျဆိုပွီး ဦးမွငျ့ဝနှေငျ့ ဒျေါထားဝတေို့၏ အမှစေားအမှခေံ မှေးစားသမီးတဦး အဖွဈမှေးစားခံရခွငျးဖွဈသညျ။ လူပုံအလညျ ပှဲတကျလမျးတကျ ဦးမွငျ့ ဝသေမီးအဖွဈတော့ သနျးသနျးဘဝစိတျအေးသှားရပမေယျ့ လကျတှတှေ့ငျတော့ မှေးစား တာဆိုသညျ့အတိုငျး ဦးမွငျ့ဝေ စားသညျ ကို နစေ့ဉျခံနရေသညျ။ဒါကွောငျ့ သနျးသနျးဒီဘဝက လှတျလပျအောငျကွိုးစားလာရတော့သညျ။အကောငျးဆုံးနညျးက မိမိအလှ ကိုအသုံးခပြွီး မိမိကိုဒီဘဝက လှတျမွောကျအောငျလုပျပေးနိုငျမညျ့ယောကျြားတဈယောကျကိုရှာဖို့ပဲဖွဈသညျ။ ဒီ့အတှကျ သနျး သနျး အဝတျအစားကို ပြံလံနအေောငျဝတျသညျ၊ ယောကျြားတကာမိမိအပျေါစိတျဝငျစားလာအောငျနညျးမြိုးစုံနှငျ့ လုပျသညျ။
ပိုကျဆံခမျြးသာသော ဘောဂဲကွီးမြားနှငျ့တှလြေှ့ငျ အရငျဦးဆုံးမှုတျပေးလိုကျတော့သညျ၊ သူတို့တှစှေဲလြှငျ မိမိနားကပျနမေညျပေါ့၊ ထိုသို့ကွံစီ ကွိုးစားနရေငျးကိုကိုကွီးနှငျ့တှသေ့ညျ။ကိုကိုကွီးက မိမိတှဖေူ့းသမြှ ယောကျြားမြားထဲတှငျ မိမိကိုအစှဲအလနျးဆုံး တငျ့ တောငျးတငျ့တယျလကျထပျယူမညျဆိုတော့ ဘာမှမလိုတော့ ကိုကိုကွီးနှငျ့ လကျထပျလိုကျသညျ။ဦးမွငျ့ဝေ ကိုလကျထပျပီးစ အခြိနျက ခံလိုကျသေးသျောလညျး နောကျပိုငျးသူလညျးမိမိကိုအဆကျအသှယျသိပျမလုပျတော့ အေးဆေးဖွဈသှားသညျ။ကိုကိုကွီး နှငျ့ဘာမြှပွဿနာမရှိပမေယျ့ ကိုကိုကွီးအဖကေဦးသိုကျမောငျးဖွဈနတောကိုတော့ မကျြနှာနညျးနညျးပူသညျ။ဒါပမေယျ့ သနျးသနျး အတှကျက လရညျပနျးခံရသညျမှ မကျြနှာပူဦးမညျ။ ယောက်ခထီး အတှကျ ဖငျခံလိုကျလြှငျပွီးသှားမှာပဲ ဆိုသညျ့ခပျပေါ့ပေါ့အတှေး တဈခုသာရှိသညျ။ “ဒါပါပဲ စိုငျးရယျ ကြှနျမဘ၀ လှတယျမဟုတျလား..စိုငျးးးးး
လက်ခုံပေါ်ရောက်နေသော လရည်ဖြူဖြူပြစ်ပြစ်များကို လျှာဖြင့်သိမ်းကာ မြိုချလိုက်သည်။ပြီးမှ အားမရသလို လီးကိုပါးစပ်ထဲ ရသလောက် သွင်းပြီးနှုတ်ခမ်းကိုတင်းတင်းလုပ်ခါ ခပ်သွက်သွက်ဆောင့်ဆောင့်ချသည်။ ဒစ်ပေါ်ရုံ ထုတ်ခါ ဒစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကို လျှာဖြင့်သိမ်းသိမ်း လျက်သည်။ပြန်လည်မာန်ကျနေသော လီးတချောင်းကို လက်ဖျားနုနုလေးဖြင့် အဖိုးတန်ပစ္စည်းတစ်ခုလို တယုတယ ကိုင်နေသေး၏။လီးထိပ်မှ လရည်တစ်စက် ဖြတ်ခနဲထွက်လာသေးသဖြင့် လျှာကိုထုတ်ပြီးလျက်လိုက်သေးသည်။ “မ သန်း..တော်ပြီလေ.၊ လရည်မြိုတာ မဝသေးဘူးလား၊ကျွန်တော်တော့ ဒေါင်းနေပြီ၊” စိုင်းအိုင် အမေးကို သန်းသန်းကတစ်ခစ်ခစ် ရယ်ကာ သဘောကျရင်း လီးတံတလျှောက်ကိုလက်ဖြင့်ကိုင်နေရာမှ နှာခေါင်းဖြင့် နမ်းရှုံ့လိုက်သည်။
“ခစ်..ခစ်.အို..မဝပါဘူး..ပထမတစ်ခါပဲ အားရလိုက်တယ်၊နောက်ပိုင်းက နည်းနည်းလာတာကိုး၊” “မသန်းကလဲ လိုးလည်းမလိုးရပဲ နဲ့ ကျွန်တော့်ကို သုံးခါတောင်မှုတ်တာတော့လွန်တာပေါ့..မသန်းက မှုတ်ရတာအရမ်းကြိုက်တာပဲနော်..ကျွမ်းလည်းကျွမ်းတယ်” လီးကို နှာခေါင်းဖြင့်နမ်းရှုံ့နေသော သန်းသန်းက အောက်မှနေပြီးစိုင်းအိုင်ကို မျက်လုံးလှန်ကြည့်ကာ ညှတုတုပြုံးလိုက်သည်။ကြမ်း ပေါ်ထိုင်မိန်းမထိုင်ထိုင်နေသဖြင့် ပိုးပျော့ထမီမှာသူ့တင်ပါးကိုကြွားလွင့်ခါ ပုံကျနေသည်။ရင်ဖုံးအကျီလက်ရှည်ပန်းရောင်ကို ဝတ်ဆင်ထားပြီး ခေါင်းပေါ်ကဆံပင်ကိုထုံးထားကာ ရဲရဲတောက်နေသော နီလဲ့နေသော ပတ္တမြားဆံထိုးကို ထိုးထားသည်။မျက်နှာက လဲ ကာလာရောင်စုံဖြင့် သူမပုံစံက ပွဲတက်လာသည်မှန်းသိသာလှသည်။စိုင်းအိုင်လီးကို သန်းသန်းစုပ်နေသည်မှာ တိုက်ခန်းတစ်ခု အတွင်း ဧည့်ခန်းရှိဆက်တီ ခုံပေါ်ဖြစ်သည်။ပတ္တမြားလက်ကောက်ကို ဝတ်ဆင်ထားသော လက်ကလီးကို ကိုင်၊ပတ္တမြား လက်စွပ် ဝတ်ထားသော တစ်ဖက်လက်က ဂွေးဥကိုအသာညှစ်ပြီး မိတ်ကပ်ဆိုင်ကပြင်ပေးလိုက် သော စိုလဲ့သောပန်းရောင်နှုတ်ခမ်းနီများ ဆိုးထားသောနှုတ်ခမ်းက အနီရောင်ဒစ်ဖျားကို ပွပ်သက်နေသည်။
“ဟွင်း..ဒီပုံစံနဲ့ဘယ်လို ခံမလဲ၊အခုတောင် စိုင်းကိုပြုစုချင်လွန်းလို့ ..အကျီကြေသွားရင် ..အိမ်က ယောက်ျားက မေးမှာပေါ့စိုင်းက လဲ..” “ဆက်တီကိုလက်ထောက် ထမီကိုအသာချွတ်ပြီး ကုန်းရင်ရပါတယ်ဗျာ..၊သူ .မကုန်းချင်တိုင်း..မသန်းက နင်းပြီးစုပ်တာပဲ” “ခစ်.စိုင်းကလဲကလေးကြနေတာပဲ..အတင်းပူစာနေတယ်၊နောက်လဲ လုပ်ရမှာပဲကို..ကျွန်မကတော့ လီးစုပ်တာအကြိုက်ဆုံးပဲ… အလိုးမခံရခင်တဲက လီးစုပ်လာတာ..အခုတောင်သုံးခါတည်းစုပ်ရတာ ဒီကနည်းသေးတယ်တောင်ထင်တာ.သိလား..ဟွင့်” လက်လွှတ်ပေးသဖြင့် စိုင်းအိုင်စတိုင်ဘောင်းဘီထဲသို့သူ့ညီငယ်ကို ပြန်ထည့်ရင်းဘောင်းဘီဇစ်ကိုပြန်တပ် ခါးပတ်ပြန်ဝတ်လိုက် သည်။ဆက်တီထိုင်ခုံကို ထိုင်းရင်းခါးဆန့်ကာ အကျီ၊ဘောင်းဘီကို သေသေသပ်သပ် ဖြစ်အောင် လက်နှင့်သပ်သပ်ချနေသည်။သန်း သန်းကတော့ ကြမ်းပြင်မှ ထပြီးစိုင်းအိုင်ဘေးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ခါ စိုင်းအိုင်းပေါင်လုံးကိုလက်ဖြင့်ပွပ်နေသည်။ “မသန်းကလဲပြော တော့မယ်..
အပျိုရည်မပျက်သေးဘူး.မှုတ်တာကအရင်လုပ်တာလား..ဟဲ..ဟဲ” သန်းသန်းကမျက်တောင်တုကြောင့်ညို့နေသောသူ့ မျက်လုံးကိုထောင့်ကပ်ကာ မျက်စောင်းလှမ်းထိုးရင်း “အင်းလေ..ဘာဖြစ်လဲ..ကျွန်မအပျိုဖြစ်ကတည်းက ဦးလေးကမှုတ်ခိုင်း တာ..သူ့အိမ်မှာနေရတော့ ကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ပေးရင်း …အကျင့်ဖြစ်သွားတာ..နောက်တော့အလိုးမခံရလဲ မှုတ်ပေးရရင် ကျွန်မကတော့ ပီးသွားတာပဲ” “ဦးလေးကအရင်းလား…” “ဝမ်းကွဲပါ..သူကမိန်းမရှုပ်တယ်လေ..သူ့မိန်းမကလည်းသူ့ကိုအရမ်း ကြောက်တာ..၊ကျွန်မ.ငယ်ငယ်ကဆို အခန်းထဲကနေ ..ဒေါ်ဒေါ့်ကို ရိုက်တဲ့အသံကိုကြားကြားနေရတယ်၊သူ့အိမ်မှာ နေရတာငရဲ ရောက်နေသလိုပဲ” “မသန်းငယ်ငယ်တုံးက တော်တော်ခံစားရမှာပဲနော်” သန်းသန်းလက်မောင်းကိုလက်ဖြင့်ဖက်လိုက်ပြီး သန်းသန်း ခေါင်းကိုသူ့ပခုံးပေါ်စိုင်းအိုင်မှီစေလိုက်သည်။ သန်းသန်းကလည်းရင်ဖွင့်ရမယ့်သူအနားရှိနေသဖြင့် သူမငယ်စဉ်ကအကြောင်းကို စိုင်းအိုင်ကိုပြောပြသည်။ “စိုင်းရယ်..ကျွန်မငယ်ငယ်တည်းကမိဘတွေမရှိကြတော့..အမျိုးတွေကတလှည့်ဆီလိုက်နေရတယ်၊
အမျိုးတွေကလည်းမတက်သာလို့သာခေါ်ထားရတော့..ကျွန်မကိုဟိုလူ့ဆီပို့၊ဒီလူ့ဆီပို့နဲ့ပေါ့၊ တချို့ကလည်းခေါ်ထားချင်ပေ မယ့်..ဆင်းကလည်းဆင်းရဲ..ကလေးကလည်းများဆိုတော့..မခေါ်ထားနိုင် ချမ်းသာတဲ့အမျိုးတွေကလည်း..မခေါ်ချင်.၊ဒီလိုနဲ့ ဟိုလူ့ အိမ်မှာတစ်နှစ်နေလိုက် ဒီလူ့အိမ်မှာခဏနေလိုက် နဲ့ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပါပဲ..ကျောင်းတောင်မှကောင်းကောင်းမတက်ခဲ့ရပါဘူး၊ တစ်ခါတလေ အိမ်တအိမ် မှာလေးငါးရက်နေပြီး ကျွန်မကို နောက်တစ်အိမ်ကို ပို့လိုက်တာပဲ..ဘယ်အမျိုးအိမ်လား..တစ်စိမ်းအိမ် လား တောင်မသိတော့ပါဘူး….စိုင်းရယ်..အရွယ်ရောက်လာတော့ပိုတောင်ဆိုးသေး…ဘယ်သူမှလက်မခံချင်တော့ ဘူး… တစ်ခါတလေ..
အိမ်တအိမ်ကိုလိုက်ပို့ ..ဟိုးအဝေးကြီး လမ်းလျှောက် ရောက်ပြီဆိုရင် အဲဒီအိမ်က လက်မခံရင် ကျွန်မကိုအုပ်ထိန်း တဲ့သူက ဆူအောင့်ပြီးသူ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ် ဗိုက်ကလဲဆာ..ဘာမှလဲမကျွေးဘူး တစ်လမ်းလုံး ဗိုက်ခေါက်ဆွဲလိမ်လိုက် ခေါင်းခေါက် လိုက်နဲ့ ကျွန်မမှာ အိမ်ရောက်တဲ့အထိကိုယ့်အထုပ်ကိုယ် ဆွဲပြီးလိုက်ရတာ..အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အရိုက်ခံရ..နောက်တစ်အိမ် ရောက်လည်း..အရိုက်ခံရနဲ့.. အရွယ်ရောက်တဲ့အထိပါပဲစိုင်းရယ်..” “မသန်းဘဝ..ကတော်တော်ဆိုးတာပဲနော်..နောက်ဘယ်လို ဆက်ဖြစ်သေးလဲ”
“ဟင်း…..ကျွန်မ.အပျိုအရွယ်ရောက်တော့..ကျွန်မကို အုပ်ထိန်းတဲ့သူက ကျွန်မဦးလေးဆိုတဲ့သူဆီလိုက်ပို့ တယ်လေ..ကျွန်မမှာ အဝတ်ထုပ်လေးကိုင်ပြီး သူ့အိမ်ပေါ်တက်တာတာနဲ့ဆုတောင်းလိုက်ရတာ ကျွန်မကို.ခေါ်ပါစေဆိုပြီး..နို့မို့ဆိုပြန်ရင်အရိုက်ခံရမှာ လေ..သူတို့လူကြီးနှစ်ယောက်စကားပြောကြပီး ကျွန်မကို ဦးလေးက အနားခေါ်ပြီး စူးစူးရဲရဲကိုကြည့်တာ ၊နောက်လှည့်ပြစမ်းဆို တော့နောက်လှည့်ပြရသေး တယ်…၊ကျောခိုင်းပြီးလမ်းလျှောက်ပြစမ်းဆိုတော့ လမ်းလျှောက်ပြရတာပေါ့၊ နောက်သူကလက်ခံ လိုက်ပြီဆို တော့ ဝမ်းသာလိုက်တာ..ကျွန်မကိုအရင်အုပ်ထိန်းတဲ့အဒေါ်ကြီးပြန်သွားတော့မှ ကျွန်မကိုကောင်းကောင်း ဆက်ဆံ တော့ဒါပဲ..အဲဒီနေ့ကစပြီး ကျွန်မဘဝတဆစ်ချိုးတာပဲ..ရှင်” သန်းသန်း ဦးလေးဆိုသူအိမ်ကို စရောက်ကတည်းက အရင်အိမ်များလို အိမ်အလုပ်ကိုအောက်ခြေသိမ်းအကုန်လုပ်ပါသည်။ဒါပေမယ့် ထိုအိမ်ရောက်ကတည်းက သန်းသန်းနေ့စဉ် ငိုကြွေးနေရ တော့သည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်..ဦးလေးလုပ်သူ ဦးမြင့်ဝေမှာ သူမကိုအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာ ရိုက်နှက်တက်သောကြောင့်ဖြစ် ပါသည်။သူမမှာ ဘယ်သို့ပင် အကောင်းလုပ်စေခါမူ ဦးမြင့်ဝေ၏လက်ဝါးကြမ်းကြီးများဖြင့် တင်ပါးနှင့်ကျောပြင်ကို တစ်နေ့သုံး လေးကြိမ် လောက်အဆော်ခံရတက်သည်။ကံမကောင်းလျင် တံမျက်စည်းရိုးနှင့် ခြေသလုံးကို မျက်ရည်ပေါက်ပေါက်ကျလာသည် အထိ ရိုက်တက်သည်။သို့သော် သန်းသန်းကံကောင်းသည်က ဦးမြင့်ဝေမှာ သူမကိုကျောင်းထားပေးသည်။အစားအသောက်လဲ ကောင်းမွန်စွာကျွေးသည်။မုန့်ဖိုးကိုလဲ တော်တော်များများပေးတက်သည်။သန်းသန်းမှာ ဘယ်လောက်ရိုက်ရိုက် ဒီအိမ်မှာအသားကျ လာသည်။ဦးမြင့်ဝေ သူမကိုနောက်အိမ်ကို ပို့မှာတောင်စိုးရိမ်လာမိသည်။
ဦးမြင့်ဝေတွင် သူ့မိန်းမ ထားဝေရှိသော်လည်း တစ်ခါတရံ တစ်ပတ်ဆယ်ရက် ပျောက်နေတက်သည်။ဒေါ်ထားဝေပြောပြသလောက်ဆိုလျှင် ဦးမြင့်ဝေ တွင်အငယ်နှောင်းလို မိန်းမ သုံး လေးယောက်ရှိကြောင်းသန်းသန်းအနေကြာလာတော့သိလိုက်ရသည်။ သန်းသန်းထိုအိမ်တွင် မှာပဲဆယ်တန်းအောင်ပြီး ဦးမြင့်ဝေ က ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ်ရမည်ဆိုသဖြင့် အဝေးသင် လျှောက်ပြီးစာရင်းကိုင်သင်တန်းကိုလဲတက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ဒေါ် ထားဝေမှာ ဦးမြင့်ဝေကိုဘုရားတစ်ဆူကဲ့သို့ချစ်ခင်၊ကြောက်ရွံ့သော ရိုးရိုးကြီး အညာသူမိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ဦးမြင့်ဝေ သေ ဆိုသေ ၊ရှင်ဆိုရှင် ဆိုရမလောက် ဦးမြင့်ဝေစကားကို မြေဝယ်မကျနားထောင်တက်သူဖြစ်၏။ဒေါ်ထားဝေမှာ သန်းသန်းကိုအိမ်တွင် ထားသည့်ကိစ္စကိုလည်း ဦးမြင့်ဝေသဘောတစ်ခုထဲဖြင့်လက်ခံထားသည်။
ဒေါ်ထားဝေမှာ အသားခပ်ညိုညို ဖင်ထွား ရင်ကြီး အညာသူဖြစ်သဖြင့် ဦးမြင့်ဝေ၏ ပွဲတက်မယားကြီး ရာထူးရနေခြင်းမဟုတ် ကြောင်း သန်းသန်းနားလည်လာသည်။ဦးမြင့်ဝေ ဒေါ်ထားဝေကို လက်ထပ်ထားခြင်းမှာ သူ့စကားကိုမြေဝယ်မကျ နားထောင်တက် သောအကျင့်ကောင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း အရက်ကလေးထွေလာလျှင် သူ့မိန်းမကိုဖက်ပြီး စစ နေတက်သည်။ သန်းသန်းမှာ အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်သော်လည်းလောက သဘာဝကိုနားမလည်သေးသော ထိုအချိန်က သိုးဖြူမလေးတစ်ကောင် သာ ဖြစ်နေခဲ့သည်။ “ဗြန်း” ဦးမြင့်ဝေ၏လက်ဝါးကြမ်းကြီးက သန်းသန်းဖင်ပေါ်သို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရောက်ရှိလာသည်။စားပွဲ ပေါ်လက်ဖနောင့်ကိုတင်ခါ ဖင်ကိုနောက်သို့တက်နိုင်သမျှကောက် ထားလိုက်သည်။အသံကြားလိုက်ရသော်လည်း ဖင်သားတစ်ခု လုံးကနာကျင်မှုကို စစချင်း မခံစားရ၊နောက်ပိုင်းမှ တဖြည်းဖြည်း တင်းခံလာခါဖင်နှစ်ခြမ်းလုံးနာကျင်လာသည်။ သို့သော်သန်းသန်း မှာ ဒီပုံစံကို လုံးဝမပြောင်းရဲ၊ ဦးမြင့်ဝေကတော့ ကော်ဖီခွက်ကို အသာမပြီး သန်းသန်းပုံစံကို ကော်ဖီနှင့်အတူအရသာခံနေသည်။
မနက်ခြောက်နာရီလောက် ဒေါ်ထားဝေ ဈေးသွားလျှင် ဦးမြင့်ဝေ၏ သန်းသန်းအပေါ် မနက်ပိုင်းရိုက်နှက်ချက်ဖြစ်သည်။သန်း သန်း၏ လုံးဝြပင်မရသော ပြစ်ချက်ကြောင့် ထိုသို့မနက်တိုင်းရိုက်နှက်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်က ရှင်းပါသည်။ အရွယ်ရောက် လာကတည်းက သန်းသန်းအပြစ်ကြီးစဖြစ် ပါသည်။ဦးမြင့်ဝေ ပြောသောသန်းသန်း၏အပြစ်ကြီး မှာ သူမဖင်မှာ လိုသည်ထက် ကောက်ပြီး၊ ခါလို့ဖြစ်သည်တဲ့။ သန်းသန်းမှာ ဘယ်လိုပင်ကြိုးပမ်းသော်လည်း ဦးမြင့်ဝေ လက်ဆကို ဖင်ကတောင်းဆိုနေသလို ပို လို့တောင်ကြီးလာ၊ကောက်လာ နေသည်။ ယခုမနက်က ပိုပြီးအပြစ်ကြီးသွားသည်။ဘာကြောင့်ဆိုသော် အိပ်ယာထနောက်ကျ သဖြင့် ကမန်းကတန်းပြင်ဆင်လိုက်ရာ ဆာစပိုင်ဒါဝတ်ရန်မေ့လာသည်။ ဦးမြင့်ဝေ ကို ကော်ဖီပြင်ပေးရင်း ထုံးစံအရ ဦးမြင့်ဝေက သူမကိုလှည့်ခိုင်းပြီး ဖင်ကိုရိုက်မလို့ လုပ်ချိန်မှာ ဆာစပိုင်ဒါ မဝတ်ထားကြောင်းသိသွားပြီး သူမကိုဒါဏ်ပေးလို့ စလိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်း သန်းသန်းအရိုက်ခံရင်းသိလိုက်ရသည်။ ရိုက်သာရိုက်လိုက်ရသည်။ဦးမြင့်ဝေ စိတ်ထဲတွင်လက်ဖဝါးကိုသန်းသန်းဖင် ပေါ်မှမခွာချင်အောင် ရိုက်ရင်းနဲ့သိလိုက်ရသည်။
သန်းသန်းကို ဖင်တောင့်မှန်းသိသော်လည်း ဒီနေ့မှ အတွင်းခံမဝတ် လားလို့လား မသိ၊အင်မတန်အတွေ့ကောင်းနေသည်။ ဦးမြင့်ဝေ ပုဆိုးအောက်ကလီးကလည်း ဒီနေ့မှ ခံတွင်းတောင်းနေသည်။ မတ်တောင်နေတာများ သစ်ငုတ်ကိုထောင်ထားသလားမှတ်ရ အောင် မာတင်းလို့နေသည်။အချိန်ပြည့်ကိုယ့်မျက်စိ အောက်မှာရှိနေလို့လားမသိ အရင်တုန်းက ဦးမြင့်ဝေ သန်းသန်းကိုနှိပ်စက်ခဲ့ တာတွေက ကျားသဘာဝ ရိုက်ချင်နှက်ချင်စိတ်ကိုထွက်ပေါက် ပေးနည်းတစ်မျိုးလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ဒီမနက်မှ ထူးထူးခြားခြား သန်း သန်းဖင်ကိုရိုက်လိုက်ပြီးမှ စိတ်ကရိုက်ချင်တာထက် ကိုင်ချင်တာကပိုများလာသည်။ကော်ဖီခွက်ကို အသာချရင်း သူဖင်ရိုက်တာကို ခံဖို့ကော့ပေးထားသော သန်းသန်းဖင်လုံးကိုအရသာခံကြည့်နေသည်။
“မိသန်း” “ရှင်” မျက်လုံးလေးဝိုင်းဝိုင်းနှင့် သန်းသန်း ဦးမြင့် ဝေ ခေါ်သည်ကိုလှည့်ထူးလိုက်သည်။တစ်ချက်အရိုက်ခံလိုက်ရကတည်းက ဖင်တစ်ခုလုံး ပူတင်းလာပြီး နာလာသဖြင့် မျက်ရည်က လည်းဝိုင်းနေသည်။ “သွားစမ်း..နင့်ကိုရိုက်နေကျ တုတ်ကိုယူလာခဲ့” သန်းသန်းစိတ်ထဲ တုန်ခနဲတောင်ဖြစ်သွားပြီး မျက်ရည်က ပေါက်ပေါက် ကျလာသည်။သူမကို ဦးမြင့်ဝေ လက်ဖြင့်သာအများဆုံးရိုက်လေ့ရှိသည်။တုတ်ဖြင့်မရိုက်တာ နှစ်နဲ့ချီကြာနေပြီ၊အခု တော့ ဖင်သားတစ်ခုလုံးနာနေမှ တုတ်နဲ့ထပ်အရိုက်ခံရမယ်ဆိုတော့ တွေးရင်းနဲ့တောင်ဒူးတုန်လာသည်။ဒါပေမယ့် ဦးမြင့်ဝေ အမိန့် ကို သန်းသန်းလွန်ဆန်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။သူပြောသည့်အတိုင်း မီးဖိုချောင် ထောင့်တွင်ထောင် ထားသောကြိမ်လုံးကိုယူပေးလိုက်သည်။
ဦးမြင့်ဝေလက်ထဲကို ကြိမ်လုံးထည့်ပေးပြီး နောက်နည်းနည်းဆုတ်ပြီးရပ်နေလိုက်သည်။ “မိသန်း နင်ဒီတုတ်နဲ့ရိုက်တာခံမလား၊ ငါ့ တုတ်ကို စုပ်မလား ” ဦးမြင့်ဝေမတ်တပ်ရပ်လိုက်ပြီး ပုဆိုးဖြည်ပြလိုက်သည်၊ မည်းနက်ကာ အကြောများဖောင်းတက်နေသောလီး ကို အမွှေးကောက်ကောက်များကြားမှ ကြောက်မက်ဖွယ်မြင်လိုက်ရသည်နှင့်သန်းသန်း မှာ အညှို့ခံလိုက်ရသလို မျက်လုံးများက ဦးမြင့်ဝေအောက်ပိုင်းကို ဆွံ့အစွာ ငေးမောနေမိသည်။ “ပြောလေ နင် ဘယ်တုတ်ကြိုက်လဲ …ရွှမ်း..” ဦးမြင့်ဝေက ပြောပြောဆိုဆို လက်ထဲရှိကြိမ်လုံးကို လေထဲသို့ဝှေ့ရမ်းလိုက်သည်။ကြိမ်လုံးသံကြောင့်သန်းသန်း ၏တွေဝေနေသောစိတ်မှာ ဦးတည်ရာတစ်ခုစီသို့ စိတ်ရှိတော့သည်။ပုဆိုးချွတ်ချထားသော ဦးမြင့်ဝေ အောက်ကိုဒူးတုတ်ချရင်း ဦးမြင့်ဝေပေါင်ကိုလက်ဖေါင်းဖေါင်းဖြင့် လှမ်း ကိုင်လိုက်သည်။
“ဦး တုတ်ကိုစုပ်ပါ့မယ်..ရှင်..မရိုက်ပါနဲ့..ဟင့်..ဟင့်..ကြောက်လို့ပါ…ဦးရယ်..သမီးကိုမရိုက်ပါနဲ့နော်..ဦးတုတ်ကိုပဲ ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးပါ့မယ်..ဟင့်..ဟင့်…” “အေး…ကောင်းကောင်းစုပ်ပေးစမ်း..နောက်ဆို ငါ့လီးကို နင်ကောင်းကောင်းစုပ်ပေးရင် နင့် ကို..ငါမရိုက်တော့ဘူး..” “ဟင့်..ဟင့်..တ..ကယ်.ပြောတာလား..ဦး..သမီးကို..တကယ်..မရိုက်တော့ဘူးနော်…စုပ်မယ်..စုပ်မယ်..ဦး သေးပေါက်ရင်တောင် စုပ်ပေးပါ့မယ်..ဦးရယ်..သမီးကိုမရိုက်ပါနဲ့..နော်” “အေး…မိသန်းနင်လိမ္မာတယ်..လာ ဦးလီးကိုစုပ်…သမီး ကို..လရည်အများကြီး ကျွေးမယ်..အင်း..ဟုတ်တယ်” ဦးမြင့်ဝေ သန်းသန်းခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့လီးကို သန်းသန်း၏ဟထားသော နှုတ်ခမ်းပေါက်ထဲသို့အသာထိုးသွင်းပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် သန်းသန်းပါးစပ်ကိုလိုးနေတော့သည်။သန်းသန်း လည်း သူမ ပါးစပ် ပေါက်ထဲရှိ ဝင်နေသမျှလထစ်ကို အထဲမှ လျှာဖြင့်သိမ်းသိမ်းပြီးလျက်ပေးနေသည်။
အစပိုင်း သန်းသန်းမည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိပေ မယ့် ပါးစပ်ထဲလီးတစ်ချောင်းလုံး တိုးဝင်လှုပ်ရှားနေ မှုကြောင့် မ သဘာဝ လုပ်ပေးနေရင်း လက်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းအပြင်ရောက်နေ သော လီးချောင်းကိုဂွင်းတိုက်ပေးတက်လာသည်။နောက်ပိုင်း ဦးမြင့်ဝေ ခါးကိုလှုပ်စရာမလိုတော့ပဲ သန်းသန်းခေါင်းကသာ ဦးမြင့် ဝေ ပေါင်ကြားထဲမှာသာ တစ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့သည်။ “မိသန်း..ကောင်း..တယ်..တောက်…စုပ်စုပ်…အေး..ကောင်မ..စုပ် စမ်း….ငါ့လရည်တွေအကုန်ထွက်အောင်စုပ်စမ်း…တော်တယ်..နောက်ဆို နင့်ပါးစပ်ထဲ သေးပါပေါက်ထည့်ပေးမယ်…စုပ်…အား…” ပြောဆိုညည်းညှုနေရင်း ဦးမြင့်ဝေ လီးမှလရည် ပြစ်ပြစ်များ သန်းသန်းပါးစပ်ထဲသို့ ပန်းထွက်ကုန်သည်။လရည်ထွက်ထွက် ချင်း..ဦးမြင့်ဝေက သန်းသန်း ခေါင်းကိုနောက်သို့တွန်းပြီး လီးကိုကိုင်ခါ သန်းသန်းမျက်နှာနှင့် ပါးပြင်ပေါ်သို့သာ ပန်းထုတ်နေလိုက် သည်။
ပြစ်နှစ်နေသော လရည်များက သန်းသန်းနှုတ်ခမ်းမှာနှင့် မျက်နှာအနှံ့စီးကျသွားသည်။မျက်လုံးကိုအသာမှေးပြီး ဦးမြင့်ဝေ လုပ်ကိုင်သမျှကို ခေါင်းလေးမော့ကာ သန်းသန်းငြိမ်ခံနေလိုက်သည်။ “ဟင်..ကိုမြင့်..ဘာဖြစ်နေတာလဲ….” ထိုအချိန် ဒေါ်ထား ဝေ၏အသံကို သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ကြားလိုက်ရသည်။ထိုအချိန် ဒေါ်ထားဝေ၏အသံကို သူတို့နှစ်ယောက်လုံး ကြားလိုက်ရသည်။ ဒေါ်ထားဝေ မြင်လိုက်ရသည်က သူ့လင်တော်မောင် ဦးမြင့်ဝေသည်ပုဆိုးမရှိပဲ လရည်များကိုသူ့အိမ်တွင်ခိုင်းသောကောင်မလေး မျက်နှာပေါ်သို့ လီးချောင်းကိုကိုင်ပြီး ပန်းထုတ်နေသည်ကိုထိတ်လန့်ဖွယ်တွေ့လိုက်ရသည်။မိသန်းက လည်းမျက်လုံးလေးမှေးပြီး အရသာခံနေပုံနှင့် ဒေါ်ထားဝေစိတ်ထဲ မနာလိုစိတ်က တဖွားဖွားဝင်လာတော့သည်။ဒေါ်ထားဝေအသံကြောင့် သန်းသန်းမှာ ပြာပြာ သလဲဖြစ်သွားပြီး အထိတ်ထိတ်အလန့်လန့်ဖြင့် မတ်တပ်ရပ်ခါ မျက်လုံးအကြောင်သားဖြင့် ဒေါ်ထားဝေကို ငေးမောကြည့်နေ မိသည်။
ပါးစပ်ကတော့ ပြောစရာစကားလုံးရှာမရသလို နှုတ်ခမ်းတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတော့သည်။ဦးမြင့်ဝေကတော့ ဒေါ်ထားဝေကို နိုင်နေကြမို့ တစ်ချက်ခေါင်းငဲ့ကြည့်ယုံမှအပ သိပ်အရေးမစိုက်လှပဲ ပုဆိုးကိုအသာကောက်ဝတ်နေသည်။ “ကိုမြင့်…ကျွန်မကိုရှိ သေးတယ်လို့အောက်မေ့သေးလား..ဟင်..အမလေးဖြစ်နေလိုက်ကြတာ..အရှက်မရှိ.မနက်စောစောကို..ပြောပါအုံး..ကိုမြင့်..ကျွန်မ ကို..သေအောင်သတ်နေတာလား..” “ဟာ..ကွာ..စကားများလိုက်တာ..ငါဘာလုပ်နေလို့လဲ..” “ဟင်..ဘာလုပ်နေတာလဲ..ဟတ် လား..ရှင့်…မိန်းမတစ်ယောက်လုံး အိမ်ပေါ်မှာရှိနေတာတောင်မှ..အိမ်ကခိုင်းတဲ့ကောင်မကို မှုတ်ခိုင်းနေတာ…ကျွန်မကိုစော်ကားနေ တာလား..” “မင်းကွာ..အရေးမပါတာတွေလာပြောနေတယ်…ငါ.ဘာသာ.ဘာလုပ်လုပ်နင့်ဆီငါက အရင်ခွင့်တောင်းရအုံးမှာလား… ဟင်…တောက်..ငါ့ကိုစိတ်တိုနေအောင်လုပ်တာလား..ထားဝေ” ဦးမြင့်ဝေက ပြောပြောဆိုဆိုသူ့မိန်းမ ဒေါ်ထားဝေလက်မောင်းကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။
အသားနာသွားသဖြင့် ဒေါ်ထားဝေစိတ်ထဲ မနာလိုစိတ်၊ရန်ဖြစ်ချင်စိတ် ကပျောက်သွားပြီး ဦးမြင့်ဝေကို ကြောက်နေကြစိတ်ကပြန်လည်စိုးမိုးလာသည်။အစက မိန်းမသားပီပီ တစ်သက်လုံးမော်မကြည့်ရဲသော ယောက်ျားကိုရန်တွေ့မိ သော်လည်း လက်မောင်းနာလိုက်သည်နှင့်ပုံမှန် စိတ်ဆီသို့ပြန်ရောက်သွားသလို ဦးမြင့်ဝေကို လန့်ပြီးမော်ကြည့်မိသည်။ဦးမြင့်ဝေ၏ ရိုက်နှက်တက်သော အကျင့်ကိုလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးသဖြင့် ကိုယ့်အခြေနေကို ကိုယ်နားလည်သွားသည်။ “ဟင်..ပြော လေ..ဘာငါ့ကို ကြောင်ပြီးကြည့်နေတာလည်း..ဟာကွာ…ဖြန်း…” ဒေါ်ထားဝေ ပါးကိုဖြတ်ရိုက်ခံလိုက်ရသဖြင့်ခေါင်းလည်သွားပြီး ကြမ်းပေါ်သို့ ပုံကျသွားသည်။ဦးမြင့်ဝေက ရိုက်ရတာမဝသေးသည့်အလား ဒေါ်ထားဝေဖင်ကိုဖြတ်ကန်သည်။
“ဖောင်း…” အသံက ဟိန်းထွက်လာပြီးဒေါ်ထားဝေခမျာ..ကြမ်းပေါ်သို့သုံးလေးပတ်လိမ့်သွားသည်။နောက် ဦးမြင့်ဝေကဒေါ်ထားဝေ ကိုယ်ပေါ်တက်ခွပြီး ပါးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်တော့သည်။ “ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်း…ဖြန်း…ဖြန်း…. မှတ်ပါလား..နောက်လင်ကို ခံပြောအုံးမလား..ပြော စမ်း..” “ကြောက်ပါပြီ..ကိုမြင့်ရယ်..ဟီး..ဟီး..ကျွန်မရှိကြီးခိုးပါတယ်..နောက်မပြောတော့ပါဘူး… ဟီး..” “ဘာ ခုမှကြောက်ပါပြီ လဲ..ကောင်မ နင့်မှတ်လောက်အောင်ဆုံးမရမယ်…ကဲ..ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်း..ဖြန်း……” ဦးမြင့်ဝေ၏ လက်ဝါးက ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဒေါ်ထားဝေမျက်နှာပေါ်သို့အဆက်မပြတ်ကျလာသည်။ ဒေါ်ထားဝေခင်မျာ ..ဦးမြင့်ဝေလက်မျက်နှာပေါ်မကျအောင်တက်မမျှကာ ကွယ်ရင်း ဆံပင်ဖွာလံကြဲခါအကျီကြယ်သီးများက ပြုတ်ထွက်ကုန်သည်။ထမီအထက်ဆင်ကလည်း လျော့ရဲလာပြီးထမီက ပြေ လာသည်။ထိုအချိန် ဦးမြင့်ဝေ ဒေါ်ထားဝေကိုယ်ပေါ်ခွထားသည်ကိုဖြေလိုက်ရင်း မတ်တတ်ရပ်လိုက်သည်။ထခါနီးဖင်ကို နှစ်ချက် လောက်ပိတ်ကန်ခံလိုက်ရသေးသည်။
“ထစမ်း..ထားဝေ ” ဦးမြင့်ဝေ ငေါက်လိုက်သည်နှင့် တရှုတ်ရှုတ်ငိုနေသော ဒေါ်ထားဝေ ခမျာ.အထက်ဆင်စကို စုံကိုင် ပြီးအားတင်းကာထရပ်လိုက်သည်။ “နင်က ..ငါ့လရည်တွေသူများပေးတာမကြိုက်ဘူးဆို တော့နင့်ပဲ ကျွေးရတော့မှာပေါ့…သွား..မိသန်းမျက်နှာပေါ်ကငါ့လရည်တွေကုန်အောင် လျှာနဲ့သွားရက်စမ်း….ဖြောင်း..” ပြောပြောဆိုဆို ဒေါ် ထားဝေဖင်ကိုလက်နှင့်အားပြင်းပြင်း ပိတ်ရိုက်လိုက်ပြီး သန်းသန်းဆီတွန်းလွှတ်လိုက်သည်။ကြောင်ပြီး ဦးမြင့်ဝေ လုပ်နေသမျှငေး ကြည့်နေသော သန်းသန်းလည်း သူ့ရှေ့တည့်တည့်ရောက်လာသောဒေါ်ထားဝေကြောင့်သတိပြန်ဝင်လာသည်။ဒေါ်ထားဝေက သန်း သန်းထက်လူကောင်ထွားပြီးအရပ်မြင့်သဖြင့် သန်းသန်းအပေါ်မိုးနေသည်။ “မိသန်း..နင့်အန်တီထမီကို ချွတ်ပေးလိုက်” ဦးမြင့်ဝေ ပြောလိုက်သဖြင့်သန်းသန်းခမျာ ဒေါ်ထားဝေကိုမကြည့်ရဲကြည့်ရဲ ကြည့်လိုက်ပြီး လက်က စုကိုင်ထားသောဒေါ်ထားဝေထမီဆီသို့ လှမ်းလိုက်သည်။ဒေါ်ထားဝေမှာလည်း သန်းသန်းလက်သူ့ထမီကို စချွတ်ကတည်းကဘာလုပ်ရမည်မှန်းမသိပဲ ယောင်ပြီးလွှတ်ပေး လိုက်သည်။ညိုညက်ပြီး ပြောင်တင်းနေသော ဒေါ်ထားဝေ၏ ဖင်လုံးအိုးမှာ ထယ်ဝါစွာပေါ်ထွက်လာသည်။
“ထားဝေ..ဘာလုပ်နေ တာလဲ..မိသန်းမျက်နှာပေါ်က ငါ့လရည်တွေကိုလျက်လေ..ထပ်နာချင်လို့လား” ဦးမြင့်ဝေ ငေါက်လိုက်သံကြောင့်ဒေါ်ထားဝေ လျှာ ကိုအပြားလိုက်ထုတ်ပြီး သန်းသန်းနှာခေါင်းနားရှိ ဖြူဖြူပြစ်ပြစ် လရည်အချို့ကိုလျက်ရန်အားထုတ်လိုက်သည်။ “မိသန်း..နင့်လက် ကိုသုံးပြီး ထားဝေစောက်ပတ်ကို လက်နှိုက်ပြီးပွတ်ပေးလိုက်.သူနင့်မျက်နှာပေါ်ကလရည်အားလုံးကုန်သွားတာနဲ့သူပြီးသွားတာ ..ငါ မြင်ချင်တယ်.သူမပြီးလို့ကတော့..ကြိမ်လုံးစာမိပြီသာမှတ်” ဦးမြင့်ဝေ၏ခြိမ်းခြောက်သံကြောင့် သန်းသန်းသူ့လက်ကို ဒေါ်ထားဝေ စောက်ခေါင်းပေါက်ဆီသို့ ထိုးနှိုက်ခါသွက်သွက်လေးလှုပ်ရှားလိုက်သည်။ဒေါ်ထားဝေကလည်း လျှာကိုအပြားလိုက်သူ့မျက်နှာပေါ် ကျလာသောအခါ သူမနှာခေါင်းနားက လရည်အချို့ကဒေါ်ထားဝေ၏လျှာပေါ် ဝဲခိုကာ ပါသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။သုံးလေး ချက် လျက်လိုက်သည်နှင့် ကုန်သွားတော့မည့်လရည်ကြောင့် သန်းသန်းနောက်တစ်ကြိမ် ဒေါ်ထားဝေလျှာ ကသူမ မျက်နှာနားကပ် လာသည်နှင့် နှုတ်ခမ်းဖြင့်လှမ်း စုပ်ထားလိုက်တော့သည်။
“အင့်..အင်း…အင်း…ပြွတ်..” ဒေါ်ထားဝေလည်း မထင်မှတ်ပဲ သန်းသန်း နှင့် နှုတ်ခမ်းခြင်း တေ့စုပ်မိကြသည်၊လျှာခြင်းလည်း ပွတ်တိုက်မိကုန်သည်။ နူးညံ့လွန်းသောအတွေ့ကြောင့် နှစ်ယောက်သားထို အတွေ့ပေါ် သာယာသွားကြသည်။ဒေါ်ထားဝေက သူ့လက်ကို သန်းသန်းကျောကို ပွေ့ဖက်လိုက်ရင်းသန်းသန်းလျှာကိုဆွဲစုပ်နေ တော့သည်။သန်းသန်းကတော့ ဦးမြင့်ဝေမှာထားသည့်အတိုင်း ဒေါ်ထားဝေနှင့်နမ်းစုပ်နေရင်း ဒေါ်ထားဝေစောက်ပတ်အကွဲကြောင်း ထဲလက်ချောင်းကို ထိုးထည့်ရင်းခပ်စိပ်စိပ် လေးပွတ်ပေးနေ၏။ နှစ်ယောက်သားနမ်းရှုပ်နေသည်ကို ဦးမြင့်ဝေက ခပ်အေးအေး ကုလားထိုင်ပေါ် ထိုင်ရင်းကြည့်နေလိုက်သည်။ဒေါ်ထားဝေကလည်း သူ့ဝတ္တရားကိုမမေ့ပါ၊ သန်းသန်းနှုတ်ခမ်းက လွတ်သည်နှင့် သန်းသန်းမျက်နှာပေါ်က လရည်ကိုရသလောက်သိမ်းလျက်လိုက်သေးသည်။ထိုသို့လုပ်သည်နှင့် သန်းသန်းကလည်း လက်ကိုလေး ချောင်းပူးလောက်သူ့စောက်ပတ်ထဲ စုံထည့်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် မွှေတော့သည်။
“အ..အင်း..ဖြည်း..ဖြည်း..ရှီး..အ..အင့်..မြန်မြန် လုပ်…အင်း..ဟုတ်ပြီ..အီး….အ..အ…” သန်းသန်း၏ထိုးမွှေကစားမှုကြောင့် ဒေါ်ထားဝေ ဖင်သားတစ်ခုလုံးကောက်ချိတ်ကာ ကော့လန်နေသည်။လရည်ကိုတော့ကောင်းကောင်းမလျက်နိုင်တော့ လျှာကိုသာအပြင်ဘက်ထုတ်ခါ ဝေ့ခါ ဝိုက်ခါနှင့် သန်းသန်း စောင်းတိုက်သည့် ဝေဒနာကိုခံစားနေသည်။သိပ်တော်မကြာလှသည့်အချိန်အတွင့်း ဒေါ်ထားဝေ ပေါင်ကြားမှ စောက်ရည်များတစ် ဗြစ်ဗြစ် ထွက်လာပြီး ဒေါ်ထားဝေခေါင်းမှာ သန်းသန်းပုခုံးပေါ် သို့မှီနွဲ့ကာကျသွားသည်။ နောက်မှ ဒေါ်ထားဝေအသက်ကို ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက်ရှုရင်း အမောပြေ သန်းသန်းပါးပေါ်မှ ဖြူပြစ်ပြစ်လရည်ကို လျက်လိုက်ကာမြိုချလိုက်သည်။ “ဖြန်း…” “အား..” အားပါ လှသော ဦးမြင့်ဝေ၏လက်ဝါးချက်ကြောင့် ဒေါ်ထားဝေ အင်မတန်နာကျင်ပြီးလန့်ခါအော်မိသည်။မိမိဖင်ကို ရိုက်ရုံတင်မက ဖင်သား ကြားထဲသို့လက်ဝါးစောင်းထိုးခွဲပြီး ဖင်ပေါက်ကိုပါစမ်းလာ သဖြင့်လင်ဖြစ်သူ ဦးမြင့်ဝေ ဘာလိုသည်ကို သိသော ကျွန်မယား ကောင်းပီပီ လက်ကသန်းသန်း ကိုယ်လုံးကိုစလွယ်သိုင်းဖက်ခါ ခြေထောက်နောက်ဆုတ်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးလိုက်သည်။
ပထမ ဦးဆုံး ဦးမြင့်ဝေ လက်မတုတ်တုတ်က ဖင်ဝကိုပွတ်သပ်ရင်း လက်လေးချောင်းက မိမိစောက်ပတ်ကိုပွပ်သတ်ကာ စောက်ရည်များပေကျံ နေမှ လက်နှစ်ချောက်းပူးကို ဖင်ပေါက်ထဲတစ်ဆစ်ခြင်းထည့်လိုက်သည်။ “အင်း………”ဒေါ်ထားဝေ ၏သက်ပြင်းချသံက တိုးညှင်း စွာ ပေါ်ထွက်လာသည်။ဖင်ခံနေကျမို့ ဖင်ဝကိုလည်း ဖွင့်ပေးတက်သည်။လက်ချောင်းများတစ်ဆစ်ဆစ်ဝင်လာတိုင်း အသက်ကို မှန် မှန်ရှုပြီး စအိုကြောကို လမ်းသာအောင်ပြုပြင်ပေးထားသည်။နောက်ဆုံး လက်ချောင်းများဆုံးသွားသည် နှင့် နောက်ပြန်ဆုတ်သွား သည်၊တစ်ဝက်လောက်ရောက်ယုံနှင့် အရှိန်ပြင်းပြင်းလေးတိုးဝင်လာပြန်သည်။ နောက်ပြန်ထုတ်ပြန်သွင်းနှင့် ဖင်ပေါက်ကျယ်လာမှ ဦးမြင့်ဝေက သူ့လီးကိုဖင်ထဲသို့ အံကြိတ်ထည့်သည်။
အစပိုင်းမဝင်သလိုဝင်သလိုဖြစ်ရာမှ ဒစ်ဖြားက စပြီးဖိသိပ်ကာဝင်သွား သည်။နောက်ပိုင်းကတော့ ပြန်သွင်းလိုက်ပြန်ထုတ်လိုက်ဖြင့် အချက်ကျကျကစားပေးရင်း ဒေါ်ထားဝေ အိုးကို လိုးရန်ပုံစံရသွား တော့သည်။ “ထားဝေ..မင်းဖင်ကိုငါတစ်သက်လုံးချတာမဝနိုင်ဘူးကွာ..တောက်..မင်း..အိုး …ကစံပဲ..မင်းလဲဖင်ခံရတာပျော်တယ်မ လား…….သန်းသန်း..သူ့ကိုသေချာထိန်းထား..ငါစလိုးတော့မယ်” “ဗောက်..ဗောက်…ဖက်..အား…အင်း…အ..အ..ဖေါက်..ဖေါ က်..ဖေါက်..ဖေါက်.ဖေါက်.ဖေါက်..အင့်..အင့်..အင့်.အင့်.အင့်.အင့်.အင့်..ရှီး..အင့်..” “ဟင်း..ဟင်း.တောက်.အ..အ..ဖေါက်..ဖေါ က်….ဖေါက်..ကောင်းလိုက်တာ..ထားဝေ ဟုတ်ပြီ ဆွဲပီး ညှစ်စမ်း..အင့် ..” သန်းသန်းမှာ ဒေါ်ထားဝေဖက်ထားသည်ကို တောင့် ခံထားရင်းသူ့ရှေ့မှလူနှစ်ဦးလှုပ်ရှား နေသည်ကိုသာ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနှင့် ကြည့်နေမိသည်။
သူမဖင်ကိုသာ ဦးမြင့်ဝေကဒီလို လာလိုး လျှင်ဘယ်သို့ခံရမည်ကို လည်းအသေးစိတ်မှတ်သားနေမိသည်။ ဒေါ်ထားဝေကခေါင်းမော့လိုက်သည်အချိန်တွင် တော့သူ့မျက်နှာ မှာနာကျင်ခြင်းထက် ကောင်းလွန်းလှသဖြင့် အံကြိတ်ခံနေပုံကိုမြင်ရတော့ ဖင်ခံချင်စိတ်ကပေါ်လာသည်။ “အင်း..ကောင်းလိုက်တာ ကိုမြင့်ရယ် လိုးပါ..အင့်..အင့်..လိုး..အ.အ.အ.ဖေါက်..ဖေါက်…ဖေါက်..အင့်..အင့်..အင့်……အင့်……အင့်… ကို..မြင့်..ဆောင့်..ဆောင့်..အ..အ.” “ကျွတ်..အင်းဟာ..အင်း..ထားဝေ ဟုတ်ပြီ ..နင် ဖင်ကို လှုပ်လှုပ်ပေး.အင်း..ဖေါက်..ဖေါ က်..ဗေါက်..ဗေါက်..” ဦးမြင့်ဝေ က ဒေါ်ထားဝေခါးကို ဖြစ်ထားကာ ဖင်ထဲသို့ မိမိလီးဝင်လိုက်ထွက်လိုက် ဖြစ်နေသည်ကို အချိန် အဆမှန်မှန်ဖြင့် မေးကြောကြီးများထောင်ကာ ကောင်းကောင်းကြီးသမနေသည်။တစ်ခါတရံ စိတ်ပါ လာလျှင် ဒေါ်ထားဝေဖင်သား များကို ဆွဲညှစ်လိုက် တဖြန်းဖြန်းရိုက်လိုက်လဲလုပ်နေသည်။သန်းသန်းမျက်နှာကို အားရပါးရ စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ဒေါ်ထားဝေဖင်ကို ချ ရသည်မှာ ဦးမြင့်ဝေအဖို့ အရသာထူးကြီးဖြစ်နေ သည်။
သန်းသန်းကို လိုးရတာထက်အခုလို စိတ်ထအောင်လုပ်ပေးသည်ကိုလည်း ပိုမိုနှစ်ခြိုက်လာသည်။အခု သူ ဖင်ချနေသည်ကိုကြည့်ရင်းသန်းသန်းတစ်ယောက်ဖင်ခံချင်နေသည်မှာ မျက်နှာပေါ်တွင် အထင်အရှားဖြစ်နေသည်။ဒေါ်ထားဝေကို ထိန်းပေးထားရင်သူ့လက်က ဒေါ်ထားဝေ၏ပွင့်နေသော အကျီကိုလက်နှိုက်ပြီး ဘရာစီယာပေါ်မှ ဒေါ်ထားဝေနို့ကို ကိုင်ညှစ်နေသည်။ဖင်ခံနေသည့်ဒေါ်ထားဝေက နို့ကိုင်ခံရတာကို သိသော်လည်းအရသာရှိလှ သဖြင့် တစ်အင်အင်ဖြင့်သာညီးညူနေသည်။ဦးမြင့်ဝေ ဖင်ကိုဆယ်မိနစ်လောက် တဗေါင်းဗေါင်းချလိုက်သည်နှင့် ဖင်၏ညှစ်အားကို မခံနိုင်တော့ပဲ လရည်များဖင်ထဲသို့ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။ “ဟား..ကောင်းလိုက်တာ ထားဝေရာ ..ဟူး..ငါတော်တော်ထွက် သွားတယ်..ဖြန်း…သွားစမ်းထားဝေ ..ဈေးမှာ ဆိတ်ခြေထောက်သွားဝယ်လာခဲ့..ဆိတ်ခြေထောက်ပြုတ်နဲ့ငါမနက်စာ စားမယ်..သွား လေ” ဖင်ထဲကလရည် ပန်းထုတ်ခံလိုက်ရခြင်းနှင့်အတူ စောက်ပတ်ထဲမှ အရည်များပန်းထွက်ကုန်ခါ ပြီးသွားလို့ ဖုတ်လိုက်ဖုတ် လိုက်ဖြင့် သန်းသန်းခါးကိုအတင်းဖက်ပြီး အမောမှ မပြေသေးခင်ဦးမြင့်ဝေပြောပြော ဆိုဆိုဖြင့် သူတင်ပါးကို ရိုက်ပြီးခိုင်းလိုက်သံ ကြောင့် ကြာပွတ်စာ မိသွားသောကျေးကျွန်လို ထမီလေးကောက်စွတ်ကာ မီးဖိုချောင်မှ ခပ်သုတ်သုတ်လေး ဈေးသို့ထွက်သွား တော့သည်။
မပြော့တပျော့ဖြစ်နေ သောလီး နှင့် သန်းသန်းတစ်ယောက်ဦးမြင့်ဝေနှင့် တစ်အိမ်ထဲ ကျန်ခဲ့သည်။ “ကဲသန်းသန်း လီး တော့စုပ်ပီးသွားပြီ၊ လာ…ငါ..သေးပေါက်ချင်တယ် အိမ်သာထဲလိုက်ခဲ့..ဒီနေ့ကစပြီး နင်က ငါ့ရဲ့ ဆီးအိုးဖြစ်သွားပြီ…..ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ… ဟဲ….” ထိုနေ့မှစ၍ သန်းသန်းမှာ ဦးမြင့်ဝေ၏ ကိုယ်လုပ်တော်လုံးလုံး ဖြစ်သွားတော့သည်။ဒေါ်ထားဝေမှာလည်း ဦးမြင့်ဝေ ချိုးထား သဖြင့် လုံးဝကိုမလှန်ရဲပဲ ဦးမြင့်ဝေစိတ်တိုင်းကျ ဆက်ဆံခံနေရသည်။သန်းသန်းကတော့ ပြောနေစရာမလိုတော့ ဦးမြင့်ဝေ ၏လူမ ဆန်သော နည်းမျိုးစုံကို ဖြင့်အလိုးခံ နှိပ်စက်ခံနေရတော့သည်။အစပိုင်းကတော့ ဦးမြင့်ဝေမှာ သန်းသန်းကိုလိုးဖို့သာ စိတ်ထက်သန် သော်လည်း လိင်စိတ်ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ သန်းသန်းမှာ အလိုးခံရတာနှင့်မကာမိအောင် ရိုက်နှက်ခံရတက်သည်။ နောက်ပိုင်း သန်းသန်းမှာ ဦးမြင့်ဝေလိုးမှာကိုတောင်တွေးကြောက်လာသဖြင့် ရှောင်ဖယ်ဖယ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတိုင်းဦးမြင့်ဝေ၏အရိုက်အနှက်ကို ပိုခံရသဖြင့် သူ့လီးတောင်တာမြင်သည်နှင့် ကုန်းစုပ်တာအလေ့အကျင့်တောင်ဖြစ်လာသည်။
သန်းသန်းမှာ လီးတောင်တာ တွေ့သည် နှင့်မိမိလျှာ ကိုသုံးပြီး ပါးစပ်နှင့် စုပ်ပေး ခြင်းဟာ အရိုက်အနှက်ခံရဖို့ အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အတွေ့အကြုံကသင်ခန်းစာပေးထား သဖြင့် လရည်ထွက်အောင်သာကြိုးစားတော့သည်။အလိုးခံရသည်ထက် မှုတ်ပေးခြင်းက မိမိအတွက်ပိုသက်သာအမှုတ်ခံရသူ လည်း ပိုသဘောကျ မရွံတက်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း သန်းသန်းမှာ သိလာသဖြင့် ဦးမြင့်ဝေ အနားကပ်လာသည်နှင့် စိတ်ထစေမည့်စကားမျိုးပြောကြားခြင်း၊ပွတ်သပ်ကိုင်တွယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီး လီးတောင်သည်နှင့် ပုဆိုးလှန်ခါ ကုန်းစုပ်တက်သည် မှာ အရသာတောင်ဖြစ်လာသည်။ဒေါ်ထားဝေကလည်း ထိုနေ့သန်းသန်းနှင့် စဆက်ဆံ ခံလိုက်ရကတည်းက ဦးမြင့်ဝေမရှိလျှင် ည ဖက်တွင်သန်းသန်းနှင့်ဒေါ်ထားဝေတို့ တအိပ်ယာထဲအတူအိပ်ကျသည်။ နေ့လည်ဖက်တွင် ပျင်းပျင်းရှိလာလျှင်တောင်မှ ဒေါ်ထား ဝေက သန်းသန်းထမီကိုလှန်ပြီး သန်းသန်းစောက်ပတ်ကို တက်လျက်တော့သည်။
သန်းသန်းမှာ တချိန်ထဲ စောက်ပတ်အလျက်ခံ ရတက်ပြီး လီးစုပ်ပေးရသည့်နေ့မျိုးလည်းရှိလာသည်။တော်သေးသည်က သန်းသန်းမှာ လူမြင်တင့်တယ်အောင်ဆိုပြီး ဦးမြင့်ဝေနှင့် ဒေါ်ထားဝေတို့၏ အမွေစားအမွေခံ မွေးစားသမီးတဦး အဖြစ်မွေးစားခံရခြင်းဖြစ်သည်။ လူပုံအလည် ပွဲတက်လမ်းတက် ဦးမြင့် ဝေသမီးအဖြစ်တော့ သန်းသန်းဘဝစိတ်အေးသွားရပေမယ့် လက်တွေ့တွင်တော့ မွေးစား တာဆိုသည့်အတိုင်း ဦးမြင့်ဝေ စားသည် ကို နေ့စဉ်ခံနေရသည်။ဒါကြောင့် သန်းသန်းဒီဘဝက လွတ်လပ်အောင်ကြိုးစားလာရတော့သည်။အကောင်းဆုံးနည်းက မိမိအလှ ကိုအသုံးချပြီး မိမိကိုဒီဘဝက လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မည့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုရှာဖို့ပဲဖြစ်သည်။ ဒီ့အတွက် သန်း သန်း အဝတ်အစားကို ပျံလံနေအောင်ဝတ်သည်၊ ယောက်ျားတကာမိမိအပေါ်စိတ်ဝင်စားလာအောင်နည်းမျိုးစုံနှင့် လုပ်သည်။
ပိုက်ဆံချမ်းသာသော ဘောဂဲကြီးများနှင့်တွေ့လျှင် အရင်ဦးဆုံးမှုတ်ပေးလိုက်တော့သည်၊ သူတို့တွေစွဲလျှင် မိမိနားကပ်နေမည်ပေါ့၊ ထိုသို့ကြံစီ ကြိုးစားနေရင်းကိုကိုကြီးနှင့်တွေ့သည်။ကိုကိုကြီးက မိမိတွေ့ဖူးသမျှ ယောက်ျားများထဲတွင် မိမိကိုအစွဲအလန်းဆုံး တင့် တောင်းတင့်တယ်လက်ထပ်ယူမည်ဆိုတော့ ဘာမှမလိုတော့ ကိုကိုကြီးနှင့် လက်ထပ်လိုက်သည်။ဦးမြင့်ဝေ ကိုလက်ထပ်ပီးစ အချိန်က ခံလိုက်သေးသော်လည်း နောက်ပိုင်းသူလည်းမိမိကိုအဆက်အသွယ်သိပ်မလုပ်တော့ အေးဆေးဖြစ်သွားသည်။ကိုကိုကြီး နှင့်ဘာမျှပြဿနာမရှိပေမယ့် ကိုကိုကြီးအဖေကဦးသိုက်မောင်းဖြစ်နေတာကိုတော့ မျက်နှာနည်းနည်းပူသည်။ဒါပေမယ့် သန်းသန်း အတွက်က လရည်ပန်းခံရသည်မှ မျက်နှာပူဦးမည်။ ယောက္ခထီး အတွက် ဖင်ခံလိုက်လျှင်ပြီးသွားမှာပဲ ဆိုသည့်ခပ်ပေါ့ပေါ့အတွေး တစ်ခုသာရှိသည်။ “ဒါပါပဲ စိုင်းရယ် ကျွန်မဘ၀ လှတယ်မဟုတ်လား..စိုင်းးးးး
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မှေးစားသမီးသနျးသနျး